YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, November 04
ဥရောပစစ်မျက်နှာတွင်လည်းအင်္ဂလိပ်၊ အမေရိကန်မဟာမိတ်တပ်များသည် ဂျာမန်တပ်များ အားထိုးစစ်ဆင်တော့သည်။ ((စာမျက်နှာ - ၁၅၄ မှ ၁၅၅ ထိ) စာမျက်နှာ ပျက်သွားသည်။ဆက်လက် ဖော်ပြမည်)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/04/20080အကြံပြုခြင်း
ဧရာဝတီမှ မစ္စစ္စပီသို့ 
ငမိုးရိပ်မှ မစ်ရှီဂန်သို့ ။
အိပ်မက်ကို မစွန့် လွတ်နိုင်ဘူး
ပါရီ၊ တောင်သမန်းအင်းနှင့် ရာဇဓမ္မသင်္ဂဟကျမ်း
အင်္ဂါနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 04 2008 17:45 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ပဒေသရာဇ်ပုဂံမင်းအား ပုန်ကန်ရန် မင်းတုန်းနှင့် ညီတော်ကနောင်တို့ တောခိုသည်။ မောင်ဘိုးလှိုင်သည်လည်း ရှင်လူထွက်ပြီး မင်းတုန်းတို့နောက်သို့ လိုက်တော့သည်။ သူလည်း ပုဂံမင်းအား တော်လှန်မည်။
မောင်ဘိုးလှိုင်သည် သူပုန်ခေါင်းဆောင် မင်းတုန်း၊ ကနောင်တို့နှင့် ၀ါးရင်းတုတ်ရွာတွင် ဆုံမိသည်။ မည်သည့်ဒေသတွင် အခြေစိုက်၍ ပုဂံမင်းအား သူပုန်ထမည်နည်း။ ကနောင်မင်းသားက ရှမ်းပြည်နယ်သို့ သွားလို၏။ ငမြာရွာသူကြီး မောင်တုတ်က ကသည်းပြည်သို့ သွားလို၏။ မောင်ဘိုးလှိုင်က ရွှေဘိုမြို့ဝန်အား လုပ်ကြံပြီး ရွှေဘိုမှအခြေပြု၍ ပုဂံမင်းအား ပုန်ကန်ရန် အဆိုပြုသည်။ ပခန်းမင်းကြီးက ထောက်ခံ၏။ သူပုန်ခေါင်းဆောင် မင်းတုန်းကလည်း မောင်ဘိုးလှိုင်၏ အဆိုပြုချက်ကို သဘောတူသဖြင့် ရွှေဘိုတွင် အခြေစိုက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့တော့၏။ ကနောင်မင်းဦးဆောင်သည့် အမရပူရချီစစ်ကြောင်းတွင် မောင်ဘိုးလှိုင်လည်း လိုက်ပါခဲ့၏။
မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲက မပြင်းထန်ခဲ့….။ နန်းတော်က ကျဆုံးသွားခဲ့တော့သည်။ တော်လှန်ရေးကား ၅ လသာ ကြာမြင့်ခဲ့၏။ မင်းတုန်းမင်းသည်လည်း ကုန်းဘောင်သမိုင်းစဉ်အတွင်း ပဒေသရာဇ်ဘုရင်တပါးအဖြစ် နေရာယူခဲ့တော့၏။ ကနောင်မင်းသားက အိမ်ရှေ့စံမင်းသားအဖြစ် အပ်နှံခြင်းခံရသည်။ မောင်ဘိုးလှိုင်က ဘုရင်နှင့် မိဖုရားခေါင်းကြီးတို့၏ မွေးစားသားအဖြစ် မင်းသားအဆောင်အယောင်နှင့် ယောမြို့အား စားရ၏။ ၂ နှစ်ခန့်အထိ မင်းတုန်းဘုရင်က နေပြည်တော်သို့မပြန်…..။ ရွှေဘိုမှာပင် နေ၏။ ဤကာလအတွင်း နေပြည်တော်အား ကနောင်မင်းသားနှင့် ယောမင်းကြီး ဦးဘိုးလှိုင်တို့က အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြရ၏။
မင်းတုန်းမင်းခေတ် မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များထဲ၌ ကနောင်မင်းသားကြီးနှင့် ယောမင်းကြီး ဦးဘိုးလှိုင်တို့မှာ အဓိကခေါင်းကိုင် ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြ၏။ နိုင်ငံခြား ပညာတော်သင်များ စေလွှတ်ခဲ့ကြသည်။ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများစွာ တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ မီဂျီခေတ်ကဲ့သို့…..။ ဦးဘိုးလှိုင်က မင်းတုန်မင်း၏ တော်လှန်ရေးတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်တိုးတတ်ရေးအတွက် တည်ဆောက်ရေးတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ သို့သော် …. သူကား မင်းအလိုလိုက် အလိုတော်ရိမဟုတ် …..။ သို့ဖြင့် မကြာခဏ တာဝန်မှ ရပ်စဲခြင်းခံရသည်။ မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်တွင်ပင် ၉ ကြိမ်တိုင်တိုင် ရာထူးမှ ဖြုတ်ချခြင်းခံရသည်။
ယောမင်းကြီး ဦးဘိုးလှိုင်သည် `ရာဇဓမ္မသင်္ဂဟကျမ်း` အား လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၁၅၀ ခန့်၌ ရေးခဲ့၏။ ကုန်းဘောင် ခေတ်နှောင်းကာလဖြစ်သည်။ မြန်မာပညာရှိ ဦးဘိုးလှိုင်၏ နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒအမြင်များ ဖြစ်သည်။ မှန်နန်းရိပ်မှ လွတ်လပ်သော အတွေးအခေါ်များ …..။ ပါရီနှင့် ခေတ်ပြိုင်အတွေးအခေါ်များဟု ဆိုရမည်။ တောင်သမန်းအင်းနှင့် ပါရီ ကူးလူးလွန်းထိုး၍ ကြည့်ခွင့်ရသည်။ ပါရီတွင်ကား ….. ဒေါက်တာအဒမ်စမစ်၊ သောမတ်မေ(လ်)သပ်(စ်)၊ ဒေးဗစ်ရီကာဒို ……။ တောင်သမန်းအင်းတွင်က ….. ယောအတွင်းဝန်မင်းကြီး ဦးဘိုးလှိုင်……။ ခေတ်ပြိုင်များဟု ဆိုရမည်။
သမိုင်းဆရာများက `ပါရီ`သည် ထိုခေတ်က ခေတ်ကို စိန်ခေါ်သည့်နေရာဟု ၀ိဂြိုဟ်ပြုကြ၏။ ဤသို့ဆိုလျှင် အမရပူရသည်… တောင်သမန်းအင်းသည်လည်း……။
``ကုန်သည်လယ်လုပ်တို့ကို လုပ်အောင်၊ ကူးသန်းအားရှိအောင် အပိတ်အပင်မရှိ ဖွင့်၍ အခွင့်ပေးခြင်း ဤကဲ့သို့ နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးရှိလျှင် ကုန်သည်တို့လည်း ကောင်းစွာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်းကို မပြုနိုင်ရာ၊ လယ်ယာလုပ်ဆောင်သည့် တောင်သူတို့သည်လည်း လယ်ယာကိုကောင်းမွန်စွာ မလုပ်ဆောင်နိုင်ရာ ``
ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုကို အပိတ်အပင်၊ အဟန့်အတား၊ အနှောင့်အယှက်မရှိ ဖွင့်ပေးရမည်။ အချုပ်အချယ်မရှိ လွတ်လပ်စွာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခွင့် ရှိရမည်ဟု ယောမင်းကြီး ဦးဘိုးလှိုင်က ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု (Free Trade) သဘောတရားပင်ဖြစ်သည်။
အချုပ်အချယ်မရှိ လွတ်လပ်စွာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဟူသည့် ဦးဘိုးလှိုင်၏ အယူအဆသည် ကုန်းဘောင်ခေတ် မြေရှင်ပဒေသရာဇ်စနစ်၏ မှန်နန်းဆောင်အရိပ်အတွင်း မည်မျှကျယ်လောင်၍ မြည်းဟီးနိုင်လိမ့်မည်နည်း……။
``အကူးအသန်းအရောင်းအ၀ယ် အလုပ်အဆောင် မပျက်မစီး ကောင်းမွန်စွာ ကူးသန်းလုပ်ဆောင်ရအောင် အကြီးအအုပ်နှင့်တကွ အစောင့်အရှောက် အထိန်းအသိမ်း ထားသင့်သည်။ အကြီးအအုပ်နှင့်တကွ အစောင့်အရှောက် အထိန်းအသိမ်း ထားပြီးမှ ကောင်းမွန်စွာ ကူးသန်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရာသည်``
သက်ဦးဆံပိုင် ပဒေသရာဇ်ခေတ်အတွင်းဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က မြေရှင်ပဒေသရာဇ်ကြီးတို့သည် မင်းဧကရာဇ်၏ နန်းရိပ်၊ နန်းဝါအတွင်းမှ ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု မှန်သမျှတို့အား လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားကြမည်။ အခွန်အတုတ်အမျိုးမျိုးဖြင့် ကြီးပွား၍နေကြသည်။ လက်ဆောင်ပဏ္ဍာ ဆက်မှုအမျိုးမျိုးအား ခံယူ၍ ကျေနပ်နေကြလိမ့်မည်။ မှန်နန်းတော်အတွင်း မင်းစည်းစိမ်အပြည့်နှင့် နှစ်သက်နေကြလိမ့်မည်။ ဤအခြေအနေ၊ ဤ၀န်းကျင်၊ သို့သော် နိုင်ငံအရိပ်အတွင်း၌ ယောအတွင်းဝန်သည် မင်းလုပ်အုပ်စိုးသော အစိုးရသည် စီးပွားရေးတွင် ၀င်မစွက်သင့်၊ မပါဝင်၊ မချယ်လှယ်ရ….။ အစိုးရသည် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးစနစ်ကြီး ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက်သာ စောင့်ထိန်းရမည်။ ဒရ၀မ်အဖြစ်သာ တာဝန်ယူသင့်သည်။ ဤသို့…..ဦးဘိုးလှိုင်က ယူဆသည်။
`ပါရီ`ကျမ်းရိုးဘောဂဗေဒ၀ါဒီတို့၏ စီးပွားရေးလွတ်လပ်မှုဝါဒ (Laisser-faire) အယူအဆနှင့် ယောမင်းကြီး ဘောဂဗေဒအမြင်များက တူညီ၍နေ၏။ မှန်နန်းဆောင်အတွင်းမှ ဦးဘိုးလှိုင်၏ (Laisser–Faire) အယူအဆမှာ ခေတ်ရှေ့လွန်၍နေသည်။ တိုးတတ်သော ဘောဂဗေဒအမြင်များဟု ဆိုရမည်။ သို့သော် ….သံလျက်အောက်မှ (Laisser-Faire) က တောင်သမန်းအင်းအတွင်း မြုပ်ချီပေါ်ချီနှင့်…..။
``ကုန်သည်တို့ အားရှိအောင်လည်း ပေါင်းစုစည်းရုံး၍ ကူးသန်းစေသည်။ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်းသာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်သည်ထက် အခြားနိုင်ငံနှင့်ဆက်၍ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်းသည် သာ၍ အကျိုးကြီးမားသောကြောင့် အခြားနိုင်ငံ၌ ကုန်သည်ကို ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်း၌ အပိတ်အပင် အဆီးအတား မရှိရအောင် မိတ်ဖွဲ့၍ပေးပြီးလျှင် ကူးသန်းသွားစေသည်``
ယောမင်းကြီးသည် လွန်ခဲ့သော နှစ် ၁၅၀ ခန့်ကပင် ကမ္ဘာလုံးစီးပွားရေး (Global Economy) အား တွေ့မြင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ကျမ်းရိုးဘောဂဗေဒပညာရှင် ဒေးဗစ်ရီကာဒိုအား ကမ္ဘာလုံးစီးပွားရေး (Global Economy) ၏ ခေါင်းကိုင်ပညာရှင်ဟု သတ်မှတ်ပါက ဦးဘိုးလှိုင်ကိုလည်း ရီကာဒိုနှင့်တန်းတူ နေရာပေးရမည်သာ …..။ ဇာတိဂုဏ်ပင် တတ်မိသေး၏။
ကုန်းဘောင် ခေတ်နှောင်းကာလများ၌ ဥရောပဘောဂဗေဒ အတွေးအခေါ်များတွင် မြေယာဘောဂဗေဒ ဂိုဏ်းဟူ၍ ဂိုဏ်းတဂိုဏ်း ရှိခဲ့သည်။ ထိုဂိုဏ်း၏ အယူအဆများမှာ လယ်လုပ်သူများသာ ကုန်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိ၏။ နိုင်ငံ၏ ဓနကို ဖန်တီးနိုင်၏။ ထို့ကြောင့် လယ်လုပ်သူများကိုသာ အဓိကထားရမည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ရာဇသင်္ဂဟကျမ်းတွင် ဦးဘိုးလှိုင်သည် သင်္ဂဟတရားလေးပါးအား ဤသို့ အနက်ဖွင့်၏။ ``အခွန်အတုတ်အားကြီးကိုလည်း ကုန်သည်တောင်သူတို့ကို အကူးအသန်း အလုပ်အဆောင် အားကြီးအောင် `မ`စကြည့်ရှု၍ ထိုသူတို့ အလုပ်အဆောင် အကူးအသန်း အားကြီးရာတွင် အခွန်အတုတ် အကောက်အခံရမှုများစွာသည် ဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံကို အုပ်စိုးစောင့်ရှောက်ကုန်သော မင်းမှူးမတ်တို့သည် ထိုကုန်သည် လယ်လုပ်တို့ကိုချည်း မပြတ်ကြည်ရှု၍ အားပေးရလိမ့်မည်။ ဤသို့အားပေးခြင်းသည်ပင် တိုင်းပြည်နိုင်ငံကို တိုးတတ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းမည်သည်။ ဤသို့ ကုန်သည်လယ်လုပ်တို့ကို အားရှိအောင် စောင့်မကြည့်ရှုခြင်းသည်ပင် `သမ္မာပါသ`တရားဖြစ်သည်``
ဦးဘိုးလှိုင်၏ အယူအဆသည် နိုင်ငံ၏ ဓနအား ဖန်တီးနိုင်သော အင်အားမှာ လယ်လုပ်သူများသာလျှင် မဟုတ်၊ ကုန်သည်တို့လည်း ပါသည်။ ဥရောပမှ မြေယာ ဘောဂဗေဒသမားများကဲ့သို့ တခုတည်း၌ ကျန်မနေခဲ့။ သူက ပို၍ပင် အမြင်ကျယ်နေ၏။
``ကုန်သည်လယ်လုပ်၊ ကြိုးကုတ်များစွာ လူတကာတို့ ခိုင်မာရင့်ကြည် ပြည့်ဝမ်းမည်၏`` ဟူ၍ မင်းစဉ်အလင်္ကာအား ရေးခဲ့သည်။ ဤတွင် ကုန်သည်လူတန်းစားအား ပြည့်ဝမ်းအဖြစ် သဘောထားသည်။ မြေယာဘောဂဗေဒ သမားများကဲ့သို့ `အမြုံ`အဖြစ် မမှတ်ယူ…..။ ဤနေရာ၌ ယောအတွင်းဝန်၏ အယူအဆများသည် ကျမ်းရိုးဘောဂဗေဒ၏ ခေါင်းကိုင်ဖခင်ကြီးဖြစ်သည့် ဒေါက်တာအဒမ်စမစ်နှင့် တထပ်တည်း တူညီ၍နေသည်။ အဒမ်စမစ်က လယ်လုပ်သူတို့သည် ကုန်ထုတ်အစွမ်းရှိသည်ကို မငြင်းပယ်….။ သို့သော် ကုန်သည်တို့သည် ကုန်ထုတ်အစွမ်းမရှိ။ `အမြုံ`ဖြစ်၍ နိုင်ငံ၏ ဓနကို မဖန်တီးနိုင်ဟူသည်ကိုမူ လုံးဝလက်မခံ၊ သဘောမတူ ကန့်ကွက်၏။ ဦးဘိုးလှိုင်ကဲ့သို့ပင် ``လက်မှုပညာသည်များ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ကုန်သည်များကို ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိသော အတန်းအစားတွင် စာရင်းသွင်းလိုပါသည်``
``မီးသင်္ဘော၊ မီးရထား၊ ရက်ကန်းစက်မှစ၍ စက်အမျိုးမျိုး ဖန်(လ်)၊ မှန်၊ ပန်းကန်၊ ပိုးထည်၊ ချည်ထည် အမျိုးမျိုးတို့သည် ဥာဏ်ပညာမှ ထွက်သည်ချည်းဖြစ်သည်။ စကားပြောကြေးနန်း၊ အရိပ်လူပုံကို ယူနိုင်သောအတတ် (ဓာတ်ပုံ) အစရှိသည်တို့သည်လည်း ဥာဏ်ပညာမှ ဖြစ်သည်ချည်းဟူ၍ မှတ်ရမည်``
ဥာဏ်၊ ၀ိရီယနှင့်ပြီးစီးစေသည့် လုပ်ငန်းမှန်သမျှတို့သည် ကုန်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ နိုင်ငံ၏ ဓနအား ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိ၏။ ဤသို့….ယောမင်းကြီးက ယူဆခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ အဒမ်စမစ်နှင့် မကွဲလွဲ…..။ ထိုစဉ်က ဦးဘိုးလှိုင်သာ ပါရီရောက်ခဲ့လျှင် ရာဇဓမ္မသင်္ဂဟကျမ်းသည်လည်း….. အမျိုးဂုဏ်က တက်ချင်၍ လာပြန်၏။
၁၉၉၄ ခုနှစ်ထုတ် The Economic စာစောင်တွင် ဆောင်းပါးရှင်တဦးက ``ဘာသာတရား၊ ပေါ်လစီ၊ မဟာဗျူဟာတို့အား ပေါင်းရုန်း၍ အိုင်ဒီယာ(Ideas)ပိုင်းဟူ၍ သတ်မှတ်ပြီး လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းကို လွယ်လွယ်ပင် လက်တွေ့အပိုင်းဟုခေါ်သည်။ ဤသို့ နှစ်ပိုင်းခွဲခြားပြီး အိုင်ဒီယာအပိုင်းတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားကြသည့် ပုဂိုလ်များက အုပ်စုတစု….။ လက်တွေ့ပိုင်းတွင် ကျင်လည်ကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား အုပ်စုတစု ခွဲခြားသည်။ အိုင်ဒီယာပိုင်း အုပ်စုဝင်များတွင် အသိပညာရှင်များပါဝင်ပြီး လက်တွေ့ပိုင်း အုပ်စုဝင်များတွင် အာဏာပိုင်အုပ်စိုးသူများ ပါဝင်ကြသည်။ အသိပညာရှင်သည် သိမ်မွေ့နက်နဲသော အိုင်ဒီယာများအတွင်း၌သာ စူးစိုက်၍ ရှာဖွေနေမည်၊ ဖော်ထုတ်နေမည်။ တွေ့ရှိချက်များအား တင်ပြသွားမည်။ ကိုယ်တိုင်ကမူ လက်တွေ့ထ၍ လုပ်မည်မဟုတ်။ နိုင်ငံရေးအာဏာလောကသို့ မ၀င်လို …. အဝေးကပင် နေလိုကြသည်။
ဤနည်းကဲ့သို့ပင် နိုင်ငံရေးအာဏာပိုင်တို့သည်လည်း နက်နဲသိမ်မွေ့သော အတွေးအခေါ်တို့အား တွေးခေါ်မနေလိုကြ။ အပင်ပန်းမခံချင် ရှောင်၍နေလိုကြသည်။ သို့သော် …. သူတို့နှစ်ဦး တကယ်တမ်း ပူးပေါင်းကြမိလျှင်ကား နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးမျက်နှာပြင်သည် အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲ၍ သွားတတ်သည်။ ပမာအားဖြင့် ၁၉၃၀ ၀န်းကျင်ကာလများအတွင်း ဘောဂဗေဒပညာရှင် လော့မေနပ်ကိန်း၏ အိုင်ဒီယာအား အမေရိကန်နှင့် ဥရောပရှိ အာဏာရ နိုင်ငံရေးသမားတို့က လက်တွေ့ကျင့်သုံးခဲ့ကြရာ အမေရိကန်နှင့် ဥရောပနိုင်ငံရေး မျက်နှာပြင်သည် အကြီးအကျယ်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ခဲ့ရသည်`` ။ ဤသို့ရေးထားသည်။
အကယ်၍ …. ယောအတွင်းဝန် ဦးဘိုးလှိုင်၏ အိုင်ဒီယာသည် ကုန်းဘောင်ခေတ် မှန်နန်းဆောင်အတွင်း လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့လျှင် ….. ယောအတွင်းဝန် ဦးဘိုးလှိုင်၏ အိုင်ဒီယာနှင့် ဘ၀ရှင်မင်းတရားကြီးတို့ နှစ်ဦး တကယ်တမ်း ပူးပေါင်းခဲ့လျှင် ….။ ကုန်းဘောင်ခေတ်နှောင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးမျက်နှာပြင်သည် ဘယ်သို့များ ဖြစ်လေမည်နည်း။ ကုန်းဘောင်အလွန် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းသည်လည်း ဘယ်သို့များ ရေးထိုးခဲ့ရလေမည်နည်း။ စဉ်းစားရင်း နှလုံးသွေးများက ဆူပွက်၍လာသည်။
သို့သော် ….. ``ရှင်ဘုရင်လုပ်ရတာ ငလှိုင်ပေးသရွှေ့နှင့် စားရမှာလား။ ဒီလိုဖြင့် ရှင်ဘုရင်တောင် မလုပ်ချင်တော့ဘူး`` မှန်နန်းဆောင်အတွင်းမှ အသံများက ပျံ့လွင့်၍လာသည်။
မောင်ထင်၏ ယောမင်းကြီး ဦးဘိုးလှိုင်
၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈ သတင်း
အမေရိကန်မှာ သမ္မတဘုရ်ှရဲ့နေရာ ဆက်ခံမယ့်သမ္မတသစ်ကို ရွေးချယ်ဖို့ စတင်မဲပေးနေကြပါပြီ။
ပြည်နယ် ၅၀ အနက် တ၀က်ကျော်နဲ့ ၀ါရှင်တန်ဒီစီတို့မှာ မဲစပေးနေကြတာဖြစ်ပြီး တန်းစီတဲ့
သူတွေများလွန်းလို့ မဲပေးသူဦးရေ တိုးလာလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။
၂ နှစ်နီးပါး မဲဆွယ်ခဲ့ကြတဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတလောင်း ဘရက်ခ် အိုဘားမား (Barack Obama)
နဲ့ ရီပတ်ဘလီကန်ဘက်က ဂျွန် မက်ကိန်း (JohnMcCain) တို့ဘက်က အနိုင်ရသူက ရှေ့နှစ်
ဇန်န၀ါရီလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ သမ္မတသစ်အဖြစ်ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုရပါမယ်။
တကယ်လို့ အိုဘားမား အရွေးခံရရင် သူဟာ ပထမဆုံး အာဖရိကနွယ်ဖွား သမ္မတ
ဖြစ်လာကာ ရီပတ်ဘလီကန်တို့ဘက်က အနိုင်ရရင်တော့ မက်ကိန်းလည်း အသက်
အကြီးဆုံးသမ္မတ၊ ဆာရာ ပေလင်း (Sarah Palin) လည်း ပထမဆုံး အမျိုးသမီး
လူကြိုက်နည်းလှတဲ့ သမ္မတဘုရှ် အစိုးရရဲ့နေရာမှာ အမေရိကန်များအတွက် အပြောင်း
အလဲလိုအပ်ကြောင်း၊ စီးပွားရေး တိုးမြှင့်ပေးမယ်ဖြစ်ကြောင်း အိုဘားမားက မဲဆွယ်ခဲ့
မက်ကိန်းကတော့ သူဟာ အတွေ့အကြုံရင့်သူမို့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေးကိစ္စမှာ
အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်၊ အလုပ်အကိုင်တွေ ဖန်တီးပေးမယ်လို့ ကတိပေး
အမေရိကန် မဲဆန္ဒရှင်များဟာ အောက်လွှတ်တော်အမတ် ၄၃၅ ယောက်စလုံးနဲ့
အထက်လွှတ်တော်အမတ် ၁၀၀ ထဲက ၃၅ နေရာအတွက်လည်း ဒီနေ့ မဲပေးနေကြတာ
လတ်တလော လူထုသဘောထား စစ်တမ်းများအရ အိုဘားမားက မက်ကိန်းထက် ပိုပြီး
လူကြိုက်များနေသလို ဒီမိုကရက်တစ်တို့ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်စလုံးမှာ အနိုင်ရမယ်လို့
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ ရေပိုင်နက် ကျူးကျော်ဟု စွပ်စွဲချက် မမှန်ကန်ဟု မြန်မာတာဝန်ရှိသူတို့ ငြင်းဆို
မြန်မာနဲ့ စာချုပ် ချုပ်ထားတဲ့ တောင်ကိုရီးယား ရေနံရှာဖွေရေးသင်္ဘော ၄ စင်းကို
မြန်မာရေတပ် စစ်သင်္ဘော ၂ စင်းက စောင့်ရှောက်ပြီး မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်
ကမ်းလွန်ရေနံတွေ ရှာဖွေတိုင်းတာရာမှာ မြန်မာဘက်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရေပိုင်နက်ထဲ
ကျူးကျော်တယ်ဆိုပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စစ်သင်္ဘောတွေ စေလွှတ် သတိပေးပြီးနောက်
နှစ်ဖက်ရေပိုင်နက် အပြန်အလှန်တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးကတော့ မြန်မာဘက်ကနေ ရေပိုင်နက်
ကျူးလွန်တာ မရှိဘူးလို့ ငြင်းသလို ဒီပြဿနာအတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကနေ အထူး
ကိုယ်စားလှယ်တဦး မြန်မာနိုင်ငံကိုစေလွှတ်ဖို့ ပြင်နေပါပြီ။ နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေ
နဲ့ ပတ်သက်လို့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေကို မေးမြန်းထားတဲ့ ဒေါ်ခင်မျိုးသက်နဲ့
စိန့်မာတင်ကျွန်းရဲ့ အနောက်တောင်ဘက် ၉၃ ကီလိုအကွာ ရေမိုင် ၅၃ နော်တီကယ်မှာ
မြန်မာဘက်ကသင်္ဘောတွေ ရောက်ရှိနေပြီး အဲဒီနေရာကလုပ်ကွက် ၀၈၁၃ ဟာ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှပိုင် ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာ ရှိတာမို့ ပြန်ပြီးဆုတ်ခွာဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရက
အခုလိုသတိပေးခဲ့တဲ့အပြင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စစ်သင်္ဘော ၃ စင်းကိုလည်း အဲဒီဒေသကို
စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ တနင်္လာနေ့မှာပဲ မြန်မာစစ်သင်္ဘော ၂ စင်း ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွား
တယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထုတ် သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဖေသန်းဦးကို အခြေအနေသိရဖို့အတွက်
"ဒီပလိုမက်ချန်နယ်ကနေ အခု ဆွေးနွေးနေတယ်၊ ဟုတ်တယ်။"
အခု ဒီဟာက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရေပိုင်နက်လို့ သတ်မှတ်ထားတာက သူတို့ဘာသာ
သတ်မှတ်ထားတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာဘက်ကရော အသိအမှတ်ပြုထားပါလား။
"ကျနော်တို့ အသိအမှတ်မပြုထားဘူး၊ ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဖြေရှင်းနေ
မယ်၊ အခု ဒီကနေ Foreign Secretary သွားမယ်။ ဟိုမှာ လူကြီးတွေနဲ့ ဆွေးနွေးမယ်။
ဒါတချက်၊ နောက်တချက်က ခင်ဗျားခုနမေးတဲ့ဟာ မှန်တယ်။ သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့
ဟာကို ကျနော်တို့က သဘောမတူဘူး။ ကျနော်တို့သတ်မှတ်ထားတာလည်း သူတို့က
သဘောမတူဘူး။ အဲဒါမှန်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ အခု ကျနော်တို့ တူးဖော်နေတဲ့နေရာ
က Well within hour world economic zone အဲဒါလည်း သိဖို့လိုတယ်။ ကျနော်တို့
မြန်မာသံအမတ်ကြီး ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာပဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအနေနဲ့ အခု မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ရေကြောင်းပိုင်နက်
အငြင်းပွားမှုတွေမှာ သူ့အချုပ်အခြာအာဏာ ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် ဘာမဆို လုပ်ကိုင်သွား
မယ်လို့ ပြောဆိုပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်း ရေနံနဲ့
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ရေးကိစ္စကို မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း အဖြေရှာချင်
အခြေအနေတွေကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်က သံတမန်ရေးအရ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့
အဖြေရှာချင်တယ်လို့ ပြောပေမယ့် နောက်ဆုံးရ အေအက်ဖ်ပီ သတင်းအရတော့
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရေတပ်က စစ်သင်္ဘော ၃ စင်းလုံး အငြင်းပွားနေတဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်
အော် နယ်ထဲမှာ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပူးတွဲ
နိုင်ငံခြားရေးအတွင်းဝန် အမ်မ်အေကေ မာမွတ်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်
နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီး အခုလိုပြောပါတယ်။
"ကျနော်တို့သိသလောက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရေကြောင်းပိုင်နက်ကို
ကျူးကျော်တာပါ။ ကျနော်တို့နားလည်တာက ကမ်းလွန်တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေ
စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ဖို့ အဲဒီနေရာကို သူတို့ရောက်လာတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံဘက်က ဘယ်လို
ပဲလုပ်လုပ် တဖက်သတ်လုပ်တာမျိုးတွေ ရှိလာခဲ့ရင် ဒါက မိတ်ဆွေမပီသတဲ့လုပ်ရပ်လို့
ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးအတွင်းဝန် တော့ဟစ် ဟော့ဆင်
ဦးဆောင်တဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားရောက်ဖို့ ရှိပါတယ်။
ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သွားရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံဘက်နဲ့ သံတမန်ရေး
အရ ပြဿနာကို ပြေပြေလည်လည် အဖြေရှာနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်း
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အရှေ့တောင်အာရှရေးရာ ဌာနခွဲ ဒါရိုက်တာ
အက်ရှ် အာမက် ရှာဖီကလည်း အခုလိုပြောပါတယ်။
"ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်က ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဒီနေ့ညနေ မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို
သွားမှာပါ။ အခု အငြင်းပွားနေတဲ့နေရာဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံပိုင် နယ်နိမိတ်ဖြစ်ပါ
တယ်။ ဒီနေ့တော့ မြန်မာနိုင်ငံဘက်က တစုံတရာတုံ့ပြန်တာ ကျနော်တို့ မတွေ့သေးပါ
ဘူး။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်က ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို စောင့်မျှော်နေတယ်လို့
ကျနော်ထင်ပါတယ်။ အခုလို နှစ်နိုင်ငံ ရေတပ်သင်္ဘောတွေ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ရှိနေ
ခဲ့ပေမယ့် အခြေအနေကတော့ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ဆိုးလာမယ်လို့ ကျနော် မမျှော်လင့်ပါဘူး။
သံတမန်ရေးအရ အဖြေရှာနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။"
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလဆန်းက မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်က ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး
မောင်အေးနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သွားရောက်ခဲ့တုန်းကလည်း ဒီကိစ္စကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါ
တယ်။ တိုးတက်မှု မရှိပါဘူး။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာ ၂၀၀၁ ခုနှစ်
ဇန်န၀ါရီလတုန်းက နယ်ခြား နတ်မြစ်ပေါ်မှာ မြန်မာဘက်က ရေကာတာဆောက်တာ
ကို အကြောင်းပြုပြီး နှစ်နိုင်ငံ နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေ အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေ
ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထိ တင်းမာခဲ့ဘူးပါတယ်။ သတိပေး ပစ်ခတ်တဲ့အဆင့်ပါ။ အခုတကြိမ်
ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားမှုကတော့ အဲဒီနောက်ပိုင်း ၇ နှစ်ကျော်အတွင်းမှာ အတင်းမာဆုံး
ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ အထွဋ်အထိပ်ခေါင်းဆောင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဘဲနဒစ်
(Benedict) က သူသာ အာရှနိုင်ငံတခုခုကို သွားဖြစ်ခဲ့ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခရီးတထောက်ဝင်နားဖို့ အဆင်
သင့်ရှိကြောင်း ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပုပ်ရဟန်းမင်းတပါးအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ဖို့
စိတ်ဝင်စားမှုရှိတဲ့အကြောင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ပြောဆိုလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုကျော်ကျော်သိန်းက
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခဏတာ ခရီးတထောက်ဝင်နားဖို့ အဆင်သင့်ရှိတဲ့
အကြောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံက ကက်သလစ်ဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော်ကြီး ချားလ်စ် မောင်ဘို
နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ဗာတီကန်နန်းတော်မှာ တွေ့ဆုံတဲ့အချိန် မိန့်ကြားခဲ့တာပါ။
ဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော်ကြီး ချားလ်စ် မောင်ဘိုဟာ အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနဲ့ သီးခြားတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တဲ့အကြောင်း UCA လို့ခေါ်တဲ့ Union of
Catholic Asian သတင်းဌာနရဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က
ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက ကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေဟာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ သားသမီးတွေ
ဖြစ်တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ ဆန္ဒရှိမှာကတော့ အသေအချာပဲဖြစ်ပေ
မယ့် တကယ်တမ်း မြန်မာနိုင်ငံကို သွားဖြစ်ဖို့ပေါ်မှာ သိပ်မျှော်လင့်မထားသူတဦးက
တော့ အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်၊ မြန်မာနိုင်ငံသား ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးတပါး
"သွားဖို့ဆိုရင် မြန်မာပြည်ဘက်ကလည်း ပြင်ဆင်မှုတွေ အများကြီးလုပ်ဖို့ လိုလိမ့်မယ်။
ကျနော့်အထင်တော့ လောလောလတ်လတ် ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်
အခြေအနေ အနေနဲ့လည်း လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ လုံခြုံရေးအပိုင်းတို့၊
ဘာတို့။ ကျနော်တို့ဘက်ကလည်း လက်ခံဖို့ဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ ကက်သလစ်ဘာသာ
၀င်က အနည်းစုဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပြင်ဆင်ဖို့လည်း အများကြီးလိုမယ်၊ အချိန်တွေလည်း
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဘဲနဒစ်ဟာ အာရှနိုင်ငံတွေဆီ တခါမှ ကြွချီခဲ့ဖူးခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
အကယ်၍သာ အာရှနိုင်ငံတခုခုဆီ သူ သွားဖြစ်ခဲ့ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခဏတာ ခရီး
တထောက်ဝင်နားဖို့ သူ့အနေနဲ့ အဆင်သင့်ရှိတယ်ဆိုတာကို ဆန္ဒထုတ်ဖော် မိန့်ကြား
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး မြန်မာနိုင်ငံဆီ တကယ်တမ်းကြွချီဖြစ်ဖို့ရာမှာ အခက်အခဲတွေ
အများကြီး ရှိနေနိုင်ပေမယ့် တကယ်တမ်း ကြွချီဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းမသိ
၀မ်းသာမိမှာဖြစ်သလို တတ်နိုင်သမျှနဲ့ ဧည့်ဝတ်ပြု ပူဇော်မှာပါလို့ အမေရိကန်နိုင်ငံ
ရောက် ဘုန်းတော်ကြီးက မိန့်ကြားပါတယ်။
"ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူဆိုတာ ကိုယ့်မိသားစု ရှိရှိ၊ မရှိရှိ၊ ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ၊ ချမ်းသာသည်
ဖြစ်စေ ကိုယ့်ဆီကို ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင် လာတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမဆို လက်ခံမှာပါပဲ။
ကျနော်လည်း အဲဒီလိုပါပဲ။ နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ လာမယ်ဆိုရင် အရမ်းဝမ်းသာ
မယ်၊ အရမ်းလည်း ကြည်ညိုပါမယ်။ အခုပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက ကျနော်တို့ကမ္ဘာပေါ်မှာ
ရှိတဲ့ အသင်းတော်ကြီးရဲ့ ခေါင်းဆောင်လို့ ပြောတဲ့အခါမှာ သူလာရင် ဘုရားကြွလာ
သလို လူတွေက ပျော်တယ်၊ ခံစားတယ်။ ကျနော်တို့လည်း ဒီလိုပဲ ခံစားချက်တွေရှိမယ်
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခရီးတထောက်ဝင်နားဖို့ အဆင်သင့်ရှိတယ်ဆိုတာ
နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်နေတဲ့ ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးတပါး
မြန်မာ ကက်သလစ်ဂိုဏ်းအုပ်ဘုန်းတော်ကြီး ချားလ်စ် မောင်ဘိုနဲ့ တွေ့ဆုံချိန်မှာ
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းက ဆောင်ရွက်နေတဲ့
ဆိုင်ကလုန်းဒဏ်သင့်လူထု ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေ
အနေအရပ်ရပ်အပေါ် စိတ်ဝင်တစားရှိတာကို ပြသခဲ့တယ်လိ်ု့ ဂိုဏ်းအုပ်ဘုန်းတော်ကြီး
မြန်မာနိုင်ငံက ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွေဟာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်
၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခွင့်တွေ ရကြပေမယ့် ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်း
တွေကိုတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ကိုင်ခွင့်မရကြကြောင်း၊ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်
ဘာသာရဲ့ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အဆုံးအမတော်နဲ့အညီ လူမှုနိုင်ငံရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တာတွေ
ကို ဖော်ပြပြောဆိုခွင့်မရကြောင်း ဘုရားကျောင်း သတင်းရင်းမြစ်တခုကို ကိုးကားပြီး
UCA သတင်းမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မူချောစာအုပ် အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေ
NEJ/ ၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈
ပြီးခဲ့သည့် မေလအတွင်း နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ပြည်သူသိန်းချီသေနေသည့်ကြားမှ စစ်အစိုးရ အဓမ္မ အတည်ပြုခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူချောစာအုပ်ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈ ဟု အမည်ပေးကာ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့် မကြာခင်က ထုတ်ဝေလိုက်သည်။
အဆိုပါစာအုပ်ကို သတင်းစာစက္ကူ ရိုးရိုး တအုပ် ၂၀၀၀ ကျပ်၊ စက္ကူဖြူချော တအုပ် ၂၅၀၀ ကျပ်ဖြင့် ယခုလ (၁) ရက်မှစတင်ကာ အစိုးရစာအုပ်ဆိုင်များတွင် ၀ယ်ယူနိုင်ပြီး
ပုံနှိပ်မှတ်တမ်းမှာ ၂၀၀၈ စက်တင်ဘာလတွင် အုပ်ရေ (၁၀၀၀၀) ပုံနှိပ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ စုစုပေါင်း မြန်မာဘာသာနှင့် (၁၉၄) မျက်နှာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့် (၁၉၄) မျက်နှာပါဝင်သည်။
ယခုထုတ်ဝေသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈) စာအုပ်သည် ယခင်မူကြမ်းစာအုပ်အတိုင်း ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ပြီး ဘာမျှထူးခြားချက် မပါကြောင်း ရန်ကုန်မှ ၀ါရင့်သတင်းစာဆရာကြီးတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက“ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ တမျှက်နှာစီ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖော်ပြထားတော့ စစ်အစိုးရရဲ့ ဒီအခြေခံဥပဒေဆိုတာကြီးကို နိုင်ငံခြားသားတွေပါ လေ့လာချင် လေ့လာနိုင်တာပေါ့။ ဒါမှ သူတို့လည်း ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဘယ်လောက် ဆိုးလည်းဆိုတာကို သိလိမ့်မယ်။ ပြောရရင် ဒီဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေဟာ နိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကို ဘယ်လိုမှ အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်မှာ မဟုတ်လို့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး၊ ဒီ ဖွဲ့စည်းပုံအရလုပ်မယ့် လုပ်မယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း လက်မခံနိုင်ပါဘူး” ဟုပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် မေလတွင် စစ်အစိုးရက အတည်ပြုပြဌာန်းလိုက်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ လွှတ်တော်အသီးသီးတွင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ခန့်အပ်သည့် ကိုယ်စားလှယ် (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်သည့်အပြင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကိုလည်း တိုင်းပြည်ကို ကယ်တင်ရန်ဆိုသည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် အာဏာသိမ်းယူနိုင်သည်အထိ အခွင့်အရေးများ ပေးထားသည်။
နိုင်ငံ၏အကြီးအကဲကို သမ္မတအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး သမ္မတရွေးချယ်ရေး နှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကသာ ယင်းရာထူးကို ရယူနိုင်ရန် ပြဌာန်းထားပြီး အသေးစိတ်ကိုမူ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။
လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံတွင် သမ္မတရာထူးက အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး သမ္မတကို သမ္မတရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က ရွေးချယ်မည်ဟုသာ ပြဌာန်းထားပြီး အသေးစိတ်ကို ပြဌာန်းမထားကြောင်း၊ စာမျှက်နှာ (၂၀) ပုဒ်မ ၆၀ (စ) တွင် သမ္မတနှင့် ဒု-သမ္မတများ တင်မြှောက်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့် ဥပဒေကို ပြဌာန်းပေးရမည်ဟုသာပါပြီး လက်ရှိစစ်အစိုးရက ပြဌာန်းမလား၊ နောင်ပေါ်ပေါက်လာမည့် လွှတ်တော်က ပြဌာန်းမလားဆိုသည်ကိုမူ သဲသဲကွဲကွဲရေးမထားကြောင်း တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေတဦးက သုံးသပ်သည်။
ယခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းမွန်ကြောင်း ချီးမွမ်းရေးသားထားသည့် ဆောင်းပါးများကိုမူ ပြည်တွင်းအပတ်စဉ်ထုတ် The Voice Weekly ဂျာနယ်တွင် အပတ်စဉ်ဖော်ပြနေပြီး ရေးသားသူမှာ အဆိုပါဂျာနယ်ထုတ်ဝေသူ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်းမှ သတင်းထောက်များက ပြောသည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်အတွင်း သိမ်းဆည်းခဲ့သည့် လိုင်စင်မဲ့ကားများကို အစားထိုးထုတ်ပေးရန်စီစဉ်
မင်းနိုင်သူ/ ၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈
မြန်မာစစ်အစိုးရက ၂၀၀၄ ခုနှစ်အတွင်း သိမ်းဆည်းခဲ့သည့် လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ်များအား အစားထိုးထုတ်ပေးရန် သက်ဆိုင်ရာ ယာဉ်ပိုင်ရှင်အချို့နှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့သည်။
“ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ ပြောခိုင်းလို့ဆိုပြီး စီးပွားရေးသမားတယောက်ကနေ ကျောင်းကအသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ ကားတွေ ဘယ်နှစီးရှိလဲ။ သိမ်းဆည်းစဉ်က ပေးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေ ကျန်မကျန် လာမေးတယ်” ဟု စစ်အစိုးရ၏ မော်တော်ယာဉ်သိမ်းဆည်းမှုကို ခံခဲ့ရသော ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတိုက်တတိုက် မှ ဆရာတော်တပါးက မိန့်ကြားသည်။
အဆိုပါကားအစားထိုးထုတ်ပေးမှုကို မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်လက်အောက်ခံ မြန်ဂုဏ်မြင့်ကုမ္ပဏီမှ တင်သွားထားသောကားများအား ၂၀၀၄ ခုနှစ်အတွင်း ကားအသိမ်းဆည်းခံ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတိုက်များသို့ လျှော့ဈေးဖြင့် ရောင်းချပေးခြင်းဖြစ်ပြီး သာသနာရေးနံပါတ် (သ/….) စီးရီးဖြင့်သာ လိုင်စင်ချပေးမည်ဟု သိရသည်။
“ဒါဟာ သံဃာတော်တွေနဲ့ ပြေလည်မှုရရှိစေဖို့ အစိုးရရဲ့ ကြိုးပမ်းချက် တစိတ်တပိုင်းဖြစ်မယ်။ လိုင်စင်မဲ့ကားတွေကို စီးနင်းခွင့်ပြုတုန်းကလည်း သူတို့တပ်တခုဖြစ်တဲ့ ထောက်လှမ်းရေးကနေ ၀ယ်ယူစီးခဲ့ရပြီး သိမ်းတော့ကျတော့ တပြားတချပ်မှ နစ်နာကြေးမပေးဘဲ သိမ်းသွားတယ်။ ပြန်ထုတ်ပေးတော့ အလကားမပေးဘဲ လျှော့ဈေးနဲ့ ရောင်းပေးမယ်လို့ ဆိုလာတယ်။ ပါမစ်ကို ရောင်းစားလို့ ရပေမယ့် ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ တပ်နဲ့ပတ်သက်လိုခြင်းမရှိတော့တာကြောင့် ဒီကိစ္စကို လက်မခံဘူး” ဟု အထက်ပါ ဆရာတော်က ဆက်လက်မိန့်ဆိုသည်။
အဆိုပါကားများ ထုတ်ပေးမှုကို လေလံအသွင်ဖြင့်လည်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကာ မူလကားပိုင်ရှင်များကိုသာ လေလံအောင်စေရန် စီမံသွားမည်ဖြစ်သည်ဟု မိမိတို့ ကြားသိထားရကြောင်း သတိပဋ္ဌာန်လမ်းမှ ၀ါရင့်ကားဝယ်ရောင်းသမားတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “အောက်တိုဘာ (၂၃) ရက်နေ့က တောင်ငူမှာ ကားလေလံပွဲလုပ်တယ်ဗျာ။ ကား (၁၀၀) စီးပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကား (၃၂) စီး ပါမလာဘူး။ ကြားတာကတော့ လက်နက်ကိုင် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တွေဆီက သိမ်းထားတဲ့ကားတွေဖြစ်လို့ သူတို့ကိုပဲ ပြန်ပေးလိုက်ပြီလို့ ကြားတယ်။ အဲဒီကားတွေက အမြင့်ကားတွေလေ” ဟု ဆိုသည်။
ထိုလေလံပွဲကို (၂) ရက်ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လေလံတင်သွင်းမှုကို ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လက်ခံကာ လေလံအောင် ကားများကို (၁၈/….) စီးရီးဖြင့် တရားဝင်နံပါတ်ချပေးမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းသို့သော လေလံပွဲများကို ထပ်မံပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ရာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အတွင်းက သိမ်းဆည်းခဲ့သော ကားများထဲမှ အခြေအနေ ဆိုးဝါးစွာ မပျက်စီးသေးသည့် တပ်မှ အသုံးပြုခြင်းမရှိသေးသော ကားများကို မူလပိုင်ရှင်များထံ ပြန်လည်ရောင်းချပေးသွားလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနှင့် နီးစပ်သော စီးပွားရေးသမားတဦးက ပြောသည်။
နအဖစစ်အစိုးရက ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကို ဖြိုခွဲခဲ့ပြီးနောက် ၎င်းတို့ တာဝန်ခံ စီးနင်းခွင့်ပြုခဲ့သော လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်များကို သိမ်းဆည်းခဲ့ရာ သံဃာတော်စီးယာဉ်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ယာဉ်များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ပိုင် ယာဉ်များမှာ အများဆုံးပါရှိသဖြင့် ယခုအခါ ၎င်းတို့အကြား တင်းမာမှုများ လျော့ပါးစေရန် ပြန်လည်အစားထိုးဆောင်ရွက်မှုတခုဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး လေ့လာသူအချို့က သုံးသပ်ကြသည်။
မြန်မာနှင့်အငြင်းပွားသည့် ရေပိုင်နက်သို့ ဘင်္ဂလားဒက်အစိုးရက စစ်သင်္ဘာလေးစီးလွှတ်
Agencies/ ၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈
မြန်မာ ဘင်္ဂလားဒက် အငြင်းပွားနေသည့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ရေပိုင်နက်အနီးတွင် စစ်သင်္ဘာလေးစီးချထားလိုက်ပြီး မိမိရေပိုင်နက် ကာကွယ်ရေးအတွက် ဖြစ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းမျိုးစုံသုံးပြီး ကာကွယ်သွားမည်ဟု ဘင်္ဂလားဒက်အစိုးရက ပြောသည်
မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်မှ မြန်မာ ဘင်္ဂလားဒက် အငြင်းပွားနေသည့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ရေပိုင်နက်ကို ကျူးကျော်ပြီး ရေနံနှင့်သဘောဝဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေနေသည်ဟု ဘင်္ဂလားဒက်အစိုးရက စွပ်စွဲပြီးမကြာခင် စစ်သင်္ဘောလေးစီး ဘင်္ဂလားဒက်အစိုးရက စေလွှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“မြန်မာရေတပ်ဟာ အငြင်းပွားနေတဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ရေပိုင်နက်မျက်နှာစာဘက်ကနေ ကိုရီးယားရေနံရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီက ကိရိယာတွေ တိုင်းထွာရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အတူ အရပ်သင်္ဘောနှစ်စင်းလွှတ်ထားပြီး ဒီသင်္ဘောတွေကို မြန်မာစစ်သင်္ဘောနှစ်စင်းက နောက်ပိုင်းကနေ ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်” ဟု ဘင်္ဂလားဒက် အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးအတွက် အဆင့်မြင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တဖွဲ့ကို မကြာခင် မြန်မာနိုင်ငံသို့စေလွှတ်မည်ဟု ဘင်္ဂလားဒက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အေးလဲ့ | နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈
ဧရာဝတီ | နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈
နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့သည်မှာ ၆ လရှိပြီဖြစ်သော်လည်း ကျောင်းပြန်မတက်နိုင်သည့် ကလေးငယ် သုံးသိန်းခန့်ရှိသည် ဟု Save the Children အဖွဲ့က ဆိုသည်။
Save the Children အဖွဲ့၏ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ် အင်ဒရူး ခရစ်ဝတ်ဒ် (Andrew Kirkwood) က မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရ သည့်ဒေသအတွင်းရှိ ကလေးငယ် ၄ သိန်းခန့် ကျောင်းပြန်မတက်နိုင်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့အဖွဲ့က ကလေးတသိန်း ကျောင်း တက်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြောသည်။
မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသည့်ကလေးငယ်များ ကျောင်းပြန်တက်နိုင်ရေးအတွက် ယာယီကျောင်းပေါင်း ၃၅၀ ကျော် ဆောက်လုပ် ပေးခဲ့သည်ဟု အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ထုတ် Save the Children အဖွဲ့၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကလေးငယ်အများစုသည် ၎င်းတို့၏မိဘများနှင့်အတူ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသည် ဒုက္ခများကို ဖြတ်သန်းနေရသဖြင့် ကျောင်း ပြန်တက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း ဘိုကလေးမြို့ရှိ ကျောင်းသားမိဘတဦးက ပြောသည်။
ဘိုကလေးရှိ အိမ်ရှင်မတဦးကလည်း “ကားလမ်းတလျှောက်မှာ ကလေးတွေ တောင်းရမ်းနေကြတာ၊ ဈေးရောင်းနေတာ၊ အမှိုက်ကောက်နေတာတွေ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ တချို့မိဘတွေကလည်း ကလေးတွေကို ကျောင်းပြန်မတက်ခိုင်းဘဲ တောင်းစားခိုင်းတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် သေကြေပျက်ဆီးသူ တသိန်း လေးသောင်းအနက် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကလေးငယ်များ ဖြစ်ကြသည်ဟု Save the Children အဖွဲ့က ဆိုသည်။ အသက်မသေဘဲ ကျန်ရစ်သည့် ကလေးငယ်အများအပြားသည် လည်း မိဘမဲ့များနှင့် မိဘများနှင့် ကွဲကွာလျက် ရှိသည်။
ကုလသမဂ္ဂ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာတွင် မိဘမဲ့ကလေး ၂၂၀ ရှိပြီး မိဘများနှင့်ကွဲကွာနေသည့်ကလေးငယ် ၉၁၄ ဦး တွေ့ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိ ကျောင်းစုစုပေါင်း၏ တဝက်ကျော်ပျက်စီးသည်ဟု Save the Children အဖွဲ့က ဆိုသည်။
နာဂစ်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂ၊ အာဆီယံနှင့် စစ်အစိုးရတို့ ပူးပါင်းဖွဲ့စည်းထားသည့် သုံးပွင့်ဆိုင်ဗဟိုအဖွဲ့ (တီစီဂျီ) ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူကမူ ၎င်းတို့ထုတ်ပြန်ထားသည့် ကြေညာချက်တွင် မုန်တိုင်းသင့်ဒေသများရှိ ကလေးငယ်များ ကျောင်းပြန်တက်လျက်ရှိပြီး လူကြီးများသည်လည်း လုပ်ငန်းခွင်သို့ပြန်ဝင်နေကြကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။
ဦးကျော်သူသည် စစ်အစိုးရ၏ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရ၊ DKBA ပူးပေါင်းတပ်များနှင့် KNU တိုက်ပွဲများကြောင့် ကရင်ရွာသားများ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ကြရ
ဧရာဝတီ | နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈
မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်ဖွဲ့(DKBA) ပူးပေါင်းတပ်များနှင့် ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး(KNU)တို့အကြား တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက်ရှိ ရာနှင့် ချီသော ကရင် ရွာသားများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြရကြောင်း သိရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေရက်များက တိုက်ပွဲများ ပြင်းပြင်း ထန်ထန်ဖြစ်ပွားပြီး ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့ နယ်ရှိ KNU လက်အောက်ခံ ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်(KNLA) တပ်ရင်း ၂၀၁ စခန်းကို DKBA တပ်ဖွဲ့များက သိမ်းယူခဲ့သည်ဟု KNLA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တဦးက ပြောသည်။
KNLA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တပ်ရင်း ၂၀၁ ၏ ဒု တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်ကြီး ဘူးဖော က ယခု တိုက်ခိုက်မှုသည် မြန်မာ စစ်အစိုးရ က ၎င်းတို့ ပြုလုပ်မည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် တလျှောက်ရှိ KNLA တပ် စခန်းများကို သိမ်းယူ ရေး မဟာဗျူဟာ၏ အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုသည်။
DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကမူ DKBA အနေနှင့် လက်နက်ချ၍ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည်ကို သံသယရှိကြောင်း၊ DKBA သည် ထိုင်း မြန်မာနယ်စပ်ဒေသကို ထိန်းချုပ်၍ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်လိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
DKBA သည် လွန်ခဲ့သော သြဂုတ်လလယ်ကပင် ကရင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဘားအံခရိုင်အတွင်းတွင် တပ်သား သစ်များ စုဆောင်းပြီး ရွာသားများကို အဓမ္မဖိအားပေး၍ စစ်သင်တန်းများ တက်ရောက်ခိုင်းကာ KNLA ကို ထိုးစစ် ဆင်ရန် ပြင်ဆင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံကရင်တိုင်းရင်းသားများ၏ ပြောဆိုချက်အရ သိရသည်။
ထိုင်း အာဏာပိုင်များကမူ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေသရှိ ထိုင်းရွာသားမျာကို DKBA က လာရောက် တိုက်ခိုက်မည်ကို စိုးရိမ်ရ သည့်အတွက် KNLA အနေနှင့် DKBA ကို ပြန်လည် မတိုက်ရန် ပြောဆိုသည်ဟုလည်း ဗိုလ်ကြီး ဘူးဖော က ပြောပြသည်။
အောက်တိုဘာလ အစောပိုင်းက DKBA တပ်ရင်း ၉၀၇ မှ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာရှိသော တပ်သားများသည် ထိုင်း နိုင်ငံ တာ့ခ် ခရိုင် အုန်းဖန်နယ်အတွင်းရှိ မယ့်ခလောင်ခီး ရွာသို့ ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ရာနှင့်ချီသော ထိုင်းရွာသားများ ၎င်းတို့၏ နေအိမ်များမှ ထွက်ပြေးကြရကြောင်းနှင့် ပြောင်းခင်း တချို့ကိုလည်း မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ ကြောင်း အထက်ပါ ဗိုလ်ကြီး ဘူးဖော က ပြောသည်။
ကရင်တိုင်းရင်းသား ပြည်တွင်း ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များ ကူညီကယ်ဆယ်ရေး ကော်မတီမှ နော်အိုင်းရစ် က လည်း မကြာသေးခင်က တိုက်ပွဲများကြောင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်သို့ ကရင်ဒုက္ခသည် ၅၀၀ ခန့် ထွက်ပြေး ရောက်ရှိလာကြောင်း ပြောဆိုသည်။
တခြားသော ကရင်ဒုက္ခသည်ကူညီကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့တဖွဲ့ဖြစ်သည့် Free Burma Rangers (FBR) အဖွဲ့က ထုတ်ပြန် သည့်အစီရင်ခံစာတွင် ပြည်တွင်း ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်အများစုသည် ဆေးဝါး၊ သောက်သုံးရေသန့်နှင့် စားနပ်ရိက္ခာ အခက် အခဲများ ကြုံတွေ့နေရကြောင်း၊ ယင်းဒုက္ခသည်များ နယ်စပ်သို့ ထပ်မံရောက်ရှိလာမည်ကို ထိုင်း ရွာသားများကလည်း အလွန်စိုးရိမ်မှုများဖြစ်နေကြကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာစစ်တပ်နှင့် DKBA တပ်သားများက ရွာသားများထံမှ စားရေရိက္ခာများကို အဓမ္မသိမ်းယူကြသည်ဟု ကရင် ရွှေ့ပြောင်း ဒုက္ခသည် တဦးက ပြောကြောင်းလည်း FBR အစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိသည်။
FBR အစီရင်ခံစာ၌ မြန်မာစစ်တပ်နှင့် DKBA တပ်ဖွဲ့များသည် ရွာပေါင်း ၄ ရွာရှိ အခြေခံပညာ စာသင်ကျောင်း ၄ ကျောင်း၊ စိုက်ခင်းပေါင်း ၂၆ ခင်း နှင့် အနည်းဆုံး အိမ်ခြေ ၁၄ လုံးကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး မြေမြုပ်မိုင်းများကို လည်း ထောင်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
တာချီလိတ်နှင့် မယ်ဆိုင်ရှိ နယ်စပ်ဈေးများ အရောင်းအဝယ်နည်းပါး
ကိုသက် | နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈
ထိုင်းခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျဆင်းမှုကြောင့် ခရီးသွားအများကို အမှီပြုရပ်တည်လျက်ရှိသော ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ဈေးများ ဖြစ်ကြသည့် ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့ရှိ လွယ်ပေါင်းဈေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ တာချီလိတ်မြို့ရှိ တာလော့ဈေးတို့တွင် ကုန်စည် အရောင်းအဝယ်သည် ယခင်နှစ်များနှင့်နှိုန်းယှဉ်လျှင် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့ကျသွားသည်ဟု သိရသည်။
ကမ္ဘာ့ငွေကြေးကြပ်တည်းမှုနှင့် လတ်တလောဖြစ်ပွားနေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံရေးပြဿနာများကြောင့် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား များနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသားခရီးသွားများ လာရောက်လည်ပတ်မှုနည်းရခြင်းဖြစ်သည်ဟု တာလော့ဈေးရှိ မြန်မာနိုင်ငံသား ဈေးသည်တဦးက ဧရာဝတီကို ပြောဆိုသည်။
“စက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်း ဆောင်းဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အရောင်းအဝယ် အတော်သွက်လာတယ်။ ဒီနှစ်ကျတော့ အရောင်းအဝယ်အရမ်းကျတာမှ ၄၀ ရာခိုင်းနှုန်းလောက်ကို ကျတယ်။ ချင်းမိုင်က ဗီဇာကိစ္စလာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတချို့က လွဲပြီး ကျန်တဲ့နိုင်ငံခြားသားမရှိဘူး။ ထိုင်းတွေလည်း သူတို့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာရယ် စီးပွားရေးကျတာရယ်ကြောင့် သိပ်မလာကြဘူး” ဟု အဆိုပါ ဈေးသည်က ပြောသည်။
၎င်းဒေသသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အောက်တိုဘာလမှ ဧပြီလကုန်အထိ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားများဖြင့် စည်ကားလျက်ရှိပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်နှင့် ကျောင်းပိတ်ရက်တို့တွင် ထိုင်းခရီးသွားတို့ဖြင့် စည်ကားလေ့ရှိသည်။ အဆိုပါခရီးသွား များသည် မယ်ဆိုင်ရှိနယ်စပ်ဂိတ်မှတဆင့် တာချီလိတ်ရှိ တာလော့ဈေးအထိ သွားရောက်လည်ပတ်ကာ ဈေးဝယ်လေ့ ရှိသည်။
အဆိုပါ ဈေး ၂ ဈေးတွင်လုပ်ကိုင်နေသူအများ၏ ၇၀ ရာခိုင်းနှုန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြပြီး တရုတ်နှင့် ထိုင်းလူမျိုး များလည်း ၎င်းဈေးများတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“တာလော့ဈေးက ရောင်းအားပိုကျတာပေါ့။ ကားကြီးတွေနဲ့လာတဲ့ ဧည့်သည်အများစုက မြန်မာဘက်ကမ်းကို တန်းပြီးကူး သွားပြီး ဈေးဝယ်ကြတာ၊ တချို့သယ်လို့မရတဲ့ပစ္စည်းလောက်သာ ဒီဘက်ကမ်းမှာဝယ်ကြတာ။ အရင် ဒီလိုအချိန် စနေ၊ တနင်္ဂနွေဆိုရင် တိုးမပေါက်အောင် စည်ကားတာ။ အခုတော့တချို့ဆိုင်တွေလည်း ပိတ်ထားကြတယ်” ဟု မယ်ဆိုင်ဘက်ကမ်းရှိ ဈေးသည်က ပြောသည်။
အဆိုပါဈေးများတွင် အဓိကအရောင်းသွက်ခဲ့သည့် ကုန်ပစ္စည်းများမှာ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ အလှကုန်ပစ္စည်း၊ ဆပ်ပြာနှင့် မြန်မာနိုင်ငံထုတ် သနပ်ခါးမှုန့်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
နယ်စပ်ဈေးများတွင် ရောင်းအားကျဆင်းလျက်ရှိသော်လည်း ၎င်းဒေသ၏ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာ ပုံမှန်အခြေအနေတွင်ရှိ သည်ဟု လွယ်ပေါင်းဈေးရှိ ဈေးသည်က ပြောသည်။
“နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကတော့ သိပ်မဆိုးပါဘူး၊ ပစ္စည်းအဝင်အထွက်တွေ ရှိတယ်။ မြန်မာဘက်ကမ်းကို ထိုင်းဘက်က ပစ္စည်းတွေ မှန်လုံကားတွေနဲ့ ဝင်နေတာတွေ ရှိတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ပစ္စည်းသယ်တဲ့အဖွဲ့တွေ၊ လ၀က နဲ့ ရဲတွေ အလုပ်ဖြစ်နေကြတာပေါ့” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
စက်မှုဇုန်ထုတ် ကားများ အရောင်းကျဆင်း
အင်္ဂါနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 04 2008 18:17 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ မြန်မာစစ်အစိုးရ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ပြည်တွင်း စက်မှုဇုန်ထုတ် မော်တော်ကားများ ယခုတလော အ၀ယ်မလိုက်ဘဲ ဖြစ်နေသည်။
မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများ အပြိုင်အဆိုင် တိုးပွားလာခြင်း၊ ပြည်တွင်းသို့ ဂျပန်ကား တင်သွင်းမှု မြင့်တက်လာခြင်း၊ ပြည်တွင်း စက်မှုဇုန်ထုတ် ကားအရည်အသွေး ကျဆင်းခြင်း၊ စီးပွားရေး ကျဆင်းမှုများကြောင့် ကားအရောင်းအ၀ယ် ဈေးကွက်တွင် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ပတ်ခန့်မှ စတင်ကာ ယခုလို အရောင်းကျဆင်းသွားကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိ ကားထုတ်လုပ်သူများနှင့် ကားပွဲစားများက ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
(ရန်ကုန်မှ မဇ္ဈိမ သတင်းထောက် ပေးပို့သော သတင်းကို ဖနိဒါမှ ဖြည့်စွက် ရေးသားထားသည်။)
မန္တလေးတိုင်း အန်အယ်ဒီ ၆ ဦးအတွက် အယူခံဝင်မည်
အင်္ဂါနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 04 2008 17:44 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ မန္တလေးတိုင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင် ၆ ဦးအား ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မနက်ဖြန်တွင် တရားရုံး၌ အယူခံဝင်သွားရန် ရှေ့နေများက စီစဉ်နေသည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က မန္တလေးတိုင်း အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် ဒေါ်ဝင်းမြမြ အပါအ၀င် အန်အယ်ဒီ တိုင်းစည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင် ၆ ဦးအား အိုးဘိုထောင်တွင်း တရားရုံးက ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့သည့်အနက် အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ် ၈ နှစ် အချခံရသည့် အမှုတွဲများသည် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် မကိုက်ညီသဖြင့် ယခုလ ၅ ရက်တွင် အယူခံတင်ရန် စီစဉ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
''ဒီနေ့ အယူခံတင်ဖို့ စာရွက်စာတမ်းများနေလို့ ကျနော်တို့ ကွန်ပြူတာ ရိုက်နေတာနဲ့ ဒီနေ့တင်ဖို့ဟာ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတယ်။ မနက်ဖြန်ကျရင် မန္တလေးတိုင်း အောင်မြေသာစံမြို့နယ်က ခရိုင်တရားရုံးကို အယူခံတင်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်'' ဟု ရှေ့နေ ဦးမြင့်သွင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဒေါ်ဝင်းမြမြအား ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ်၊ မန္တလေးတိုင်း ဒု - ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းလွင် (မတ္တရာအမတ်) အား ၈ နှစ်၊ ဦးကံထွန်း (တိုင်း အတွင်းရေးမှူး) အား ၁၂ နှစ်၊ ကိုတင်ကိုကို (မိတ္ထီလာမြို့နယ်စည်း အဖွဲ့ဝင်) အား ၂ နှစ်၊ ကိုမင်းသူ (မိုးကုတ်) အား ၁၃ နှစ်နှင့် ကိုဝင်းရွှေ (ကျောက်ပန်းတောင်း) အား ၁၁ နှစ် ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သူတို့အား အစိုးရကို အကြည်ညို ပျက်စေရန် ပြောဆိုမှု - ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)၊ ဘာသာ သာသနာအား အကြည်ညိုပျက်စေရန် လုပ်ဆောင်မှု - ပုဒ်မ ၁၉၅ (က)၊ လူစုလူဝေးတွင် ပါဝင်ကာ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်စေမှု - ပုဒ်မ ၁၄၇ စသဖြင့် အာဏာပိုင်များက စွဲချက်တင်ထားသည်။
ရှေ့နေဦးမြင့်သွင်က "ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ထားခြင်းက ဥပဒေအရ မှားယွင်းတယ်၊ စွပ်စွဲတဲ့ ပုဒ်မအရ မှားယွင်းတယ်၊ စွပ်စွဲတာလည်း တရားစွဲဆိုချက်အရ မှားယွင်းတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျနော်တို့လူတွေကို အပြစ်မရှိတဲ့အတွက် လွှတ်ပေးသင့်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း အယူခံတက်ရတာပါ။ တရားခံ ၆ ယောက်ရဲ့ ပြုမူလုပ်ဆောင်ချက်က စွပ်စွဲထားတဲ့ ပြစ်မှုတွေကို ကျူးလွန်တာ မဟုတ်ဘူး။ ပြုမူပြောဆိုချက်တွေက ပြစ်မှု မကျူးလွန်တဲ့အတွက် ရာဇ၀တ်မှု မမြောက်ဘူး။ မမြောက်တဲ့အတွက် လွှတ်ပေးရမယ်" ဟု ပြောသည်။
တရားရုံးထုတ်သည့်အခါ တဖက်သတ် သက်သေများ ထွက်ဆိုခဲ့သည့်အပေါ် တရားစီရင်ထုံးများနှင့် မကိုက်ညီကြောင်း ခိုင်မာသည့် အချက်များအား အယူခံလွှာများတွင် ထောက်ပြထားသည်ဟု သူက ယခုလို ပြောသည်။
"စွဲဆိုထားတဲ့ အမှုတွေက အသံဖမ်းစက်တွေနဲ့ ဖမ်းတယ်။ ပြီးမှ ထွက်ချက်တွေကို ပြန်ရေးတယ်။ ရေးပြီးတော့မှ ရုံတော်ရှေ့မှာ ထွက်တယ်။ ဒါတဆင့်ကြား သက်သေခံချက်ကို သက်သေခံ မ၀င်ဘူးလို့ ကျနော်တို့က ထောက်ပြရတယ်။ သက်သေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၀ အရ တဆင့်ကြား သက်သေခံစွဲတာ သက်သေခံ မ၀င်ကြောင်း ပြဌာန်းထားတာကို ထောက်ပြတယ်။ နောက် စီရင်ထုံးတွေ ရှိတယ်။ အဲလိုထောက်ပြပြီး အယူခံ တက်ရပါတယ်" ဟု သူက ရှင်းပြသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ၊ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဖြစ်ပွားစဉ် သူတို့အားလုံး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး မန္တလေး အိုးဘိုထောင်တွင် အကျဉ်းချထားပြီးနောက် ထောင်တွင်းတရားရုံးက ၁၈ ကြိမ်မြောက် ရုံးထုတ်အခါ ပြစ်ဒဏ်များ ချခဲ့သည်။
ရှေ့နေဦးမြင့်သွင်က "အမှု စလိုက်ကတည်းကိုက နိုင်ငံရေးအရ စွပ်စွဲထားတဲ့အတွက် ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ပြစ်ဒဏ်ကျမယ်လို့ ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးတယ်၊ ခန့်မှန်းတယ်။ ရှေ့ပိုင်း အတွေ့အကြုံတွေအရ လွှတ်လေ့လွှတ်ထ မရှိတဲ့အတွက် တရားခံတွေနဲ့ ကြိုပြီးတော့ အယူခံအတွက် ဆွေးနွေးပါတယ်။ သူတို့လုပ်ဆောင်ချက်က အမှန်တရားဖြစ်တယ်၊ အပြစ်မရှိပါဘူး" ဟု ပြောသည်။
ယခုအမှုကိစ္စအတွက် ဦးမြင့်သွင်နှင့်အတူ ဗဟိုတရားရုံးရှေ့နေ ဦးမျိုးဆွေနှင့် ဦးရွှေလှတို့လည်း လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေသည်။
ဗန်းမော်တွင် ဖောက်ထွင်းမှုများ များပြားနေ
အင်္ဂါနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 04 2008 16:37 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ရွှေလီ။ ။ ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်မြို့ရှိ ကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ကြီးများနှင့် နေအိမ်များတွင် ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရမှုများ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း နေ့စဉ်နီးပါး ဖြစ်ပွားနေသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လ ၂၁ ရက်နေ့မှ ယခုလဆန်းပိုင်းအထိ ဗန်းမော်မြို့တွင်းရှိ စက်ပစ္စည်းဆိုင်၊ အထည်ဆိုင်၊ ကုန်ပစ္စည်းစတိုးဆိုင်၊ ကုန်ခြောက်ဆိုင်နှင့် နေအိမ်များပါမကျန် ဖောက်ထွင်းခံရမှုသည် နေ့စဉ်ဆိုသလို ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားနေကြောင်း ဒေသခံများ အပြောအရ သိရခြင်း ဖြစ်သည်။
''အခု တပတ်လောက်အတွင်းကို ဆိုင်ကြီး ၆ ဆိုင်ထက်မနည်း အဖောက်ခံခဲ့ရတယ်။ အန်တီတို့ မျက်စောင်းထိုးနားက အထည်ဆိုင် အဖောက်ခံရတယ်။ အထည်ထုပ်တွေ ပါသွားတယ်'' ဟု ဗန်းမော်မြို့မရပ်မှ ဆန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ပြောသည်။
''အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်နေ့ကစပြီး နေ့တိုင်းလိုလို တရက်ခြား နှစ်ရက်ခြား အဖောက်ခံနေရတာပေါ့နော်'' ဟု အလယ်ရပ်ရှိ စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင် တဦးကလည်း မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဗန်းမော်ကားကြီးဝင်းအတွင်းမှ မ၀ါ စတိုးဆိုင်၊ အလယ်ရပ်မှ ဒေါ်အားယုံ စတိုးဆိုင်၊ မင်းကုန်းရပ်မှ ဒေါ်အားစီ မုန့်ဆိုင၊် အမှတ် (၁) ဈေးအတွင်းမှ ကုန်ခြောက်ဆိုင်၊ မင်းကုန်းရပ်မှ ဦးတင်ထွန်း ကုန်စုံဆိုင်၊ အမှတ် (၁) ဈေးအတွင်းမှ ရန်ကုန် စတိုးဆိုင်၊ သီတာမော်ရုပ်ရှင်ရုံ၊ အလယ်ရပ်မှ ဂျပ်ဆင် ထမင်းဆိုင် အပါအ၀င် နေအိမ်တချို့ပါ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ်အတွင်း ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရသည်။
ရန်ကုန်စတိုးဆိုင်မှ စက်ပစ္စည်းနှင့် MP3, MP4 ပစ္စည်း ကျပ်ငွေ ၁၀ သိန်းကျော်၊ ဒေါ်အားယုံ စတိုးဆိုင်မှ ၅ သိန်းဖိုး အပါအ၀င် ဆေးလိပ်ဖါများ၊ မုန့်ဖါများ၊ အထည်အလိပ်များ၊ ၀က်အူချောင်းနှင့် ငါးခြောက်များ ယူငင်ခံလိုက်ရသည်။
ဖောက်ထွင်းမှုအတွင်း၌ မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းမှ လာရောက်သော အခြေမဲ့အနေမဲ့များ ပါဝင်နေကာ ဗန်းမော်ရဲစခန်းတွင် အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် ကလေးများ အဖမ်းခံနေရသည်ဟု အလယ်ရပ် စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်က ပြောသည်။
သူက ''လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်ကမှ ရဲစခန်းက ကလေး ၂ ယောက်ဖမ်းမိလို့ အခု ၂ ရက်လောက် နဲနဲငြိမ်သွားတယ်'' ဟု ပြောသည်။
''အခု ဖမ်းထားတယ်လို့ ပြောတယ်။ အောက်ပိုင်းက ကလေးနှစ်ယောက်။ ဂိုဏ်းနဲ့ လုပ်ကြသလားတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ခေါင်းဆောင်တော့ မမိသေးဘူးလည်း ကြားတယ်'' ဟု ဆန်ဆိုင်ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးကလည်း ပြောသည်။
''အောက်ပိုင်းကလူတွေ အုတ်ဖိုတွေမှာ အလုပ်လာလုပ်တဲ့ မိသားစုတွေ များတယ်။ အခုတလော မိုးအရမ်းရွာတော့ အဲဒီမိသားစုတွေ အရမ်းဒုက္ခဖြစ်ပြီး၊ စားရမဲ့ သောက်ရမဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ ပွဲဈေးလှည့်ရောင်းတဲ့သူတွေ နေရပ်တွေ မပြန်တော့ဘဲ သဲသောင်ပြင်တွေမှာ တဲထိုးပြီးနေတဲ့သူတွေ ပိုများလာတယ်။ သူတို့ကလေးတွေက ပလပ်စတစ် ကောက်တာတို့ အဲလိုတွေ လုပ်ကြတယ်။ စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းကြတော့ ဂိုဏ်းဖွဲ့ပြီးများ ချောင်တဲ့နေရာမှာ လာလုပ်ကြသလားပေါ့နော်'' ဟု စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်က ဆက်ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်မြို့တွင် ယခုလို ဖောက်ထွင်းမှုများ ဖြစ်နေသလို ရှမ်းပြည်(မြောက်ပိုင်း) မူဆယ်မြို့တွင်လည်း ဆိုင်ကယ်စီးသမားများက မကြာခဏ ငွေလုယူမှုများ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့်တပတ် တနင်္လာနေ့က မူဆယ် မန်ဝိန်းကြီးဂိတ်အနီးတွင် ပန်ခမ်းရွာသူ ရှမ်းအမျိုးသမီး နန်းငွေ မြေပဲဝယ်ရန် သွားနေစဉ် ဆိုင်ကယ်စီး ငွေလုသူများက ခေါင်းကိုရိုက်ကာ ကျပ်သိန်း ၂၀ ကျော် လုယူသွားခဲ့ကြောင်း တရွာတည်းနေ ကိုမာဇော်က ပြောသည်။
''မန်ဝိန်းဂိတ်နားမှာ အစောင့်တွေရှိတဲ့ကြားက ငွေရိုက်လုတာတွေ ခဏခဏ ဖြစ်နေတယ်။ တခါမှ မိတယ်လို့ မကြားသေးဘူး။ ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ လူနှစ်ယောက်က ကပ်မောင်းပြီး ခေါင်းကို ရိုက်သွားတယ်။ မူဆယ်ဆေးရုံလည်း ၃ ရက်လောက် တက်လိုက်ရတယ်'' ဟု သူက ပြောသည်။
ရေပိုင်နက်ပြဿနာ ဖြေရှင်းရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ရန်ကုန်သို့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ စေလွှတ်မည်
အင်္ဂါနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 04 2008 15:26 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ဒါကာ။ ။ နှစ်နိုင်ငံအကြား တင်းမာမှု လျော့ပါး ပြေလည်စေရေးအတွက် နိုင်ငံခြားရေးဌာန အတွင်းဝန် ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တဖွဲ့ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ရန်ကုန်သို့ စေလွှတ်မည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဌာန အကြံပေး ဒေါက်တာ အိဖ်ခါး အာမက် ချောင်ဒရီ (Dr. Iftekhar Ahmed Chowdhury) က မြန်မာသံအမတ်ကြီးကို တနင်္လာနေ့က ဒါကာမြို့ နိုင်ငံခြားရေး ဌာနရုံးသို့ ဆင့်ခေါ်ကာ အစိုးရ၏ ကန့်ကွက်လွှာကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံကို ‘မိတ်ဆွေနိုင်ငံ’ အဖြစ် ရှုမြင်ထားသလို၊ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနှင့် ‘ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးတက်လာနေကြောင်း’နှင့် ယခု ရေကြောင်း နယ်နိမိတ်ဇုံအတွင်း ဖြစ်ပျက်နေသည့် ကိစ္စများသည် ‘အလွန် ကံမကောင်း အကြောင်းမလှသည့် ဖြစ်ထွန်းမှုများ’ ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဌာန အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်က မြန်မာသံအမတ်ကြီးကို ဆင့်ခေါ်ရာတွင် ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို နိုင်ငံခြားရေးဌာန အတွင်းဝန် အမ်တူဟစ်ဟူစိန် (M. Touhid Hossain) က ဒေါက်တာ ချောင်ဒရီက မြန်မာသံအမတ်ကြီးကို အသိပေး ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့သည် နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကိစ္စကို ဒါကာမြို့၌ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်နှင့် ၁၇ ရက်နေ့တွင် ဆွေးနွေးရန် စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည်ဟု ဒေါက်တာချောင်ဒရီက သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ပြောကြားသည်။
“ကျနော်တို့က တနင်္ဂနွေနေ့က ပြင်းထန်တဲ့ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတခု လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ကာကွယ်ဘို့အတွက် လုပ်နိုင်တာမှန်သမျှ လုပ်သွားမှာပဲလို့ မြန်မာသံအမတ်ကြီးကိုလည်း တနင်္လာနေ့က ပြောပြခဲ့တယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရေပြင်ပိုင်နက်အတွင်း မြန်မာရေယာဉ်များ ဝင်ရောက်လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဌာန အတွင်းဝန်က မြန်မာ သံအမတ်ကြီးကို ဆင့်ခေါ်ကာ အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ရေပြင်ပိုင်နက်နှင့် ရေကြောင်းဇုန် အက်ဥပဒေအရ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ကြေညာထားသော ရေပြင်ပိုင်နက်အတွင်း လှုပ်ရှားမှု အားလုံးကို ချက်ချင်း ရပ်တန့်ရန် မြန်မာအစိုးရကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရ၏ ညွှန်ကြားချက်အရ မိမိ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်ဟုလည်း ပြောသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသည် နိုင်ငံ့အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ခွင့်ရှိကြောင်းနှင့် ယင်း၏ ရေယာဉ်များ အားလုံးကို ပြန်လည် ဆုတ်ခွာသွားစေရန်နှင့် နှစ်နိုင်ငံအကြား ရေပြင်ပိုင်နက် အငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်းပြီးသည်အထိ ရေနံ ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်း ဟူသမျှကို ရပ်ဆိုင်းထားရန်လည်း အဆိုပါ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရ၏ ကန့်ကွက်လွှာတွင် အဓိက ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။
ထိုအတောအတွင်း လွန်ခဲ့သောလက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ လာရောက် လည်ပတ်ခဲ့သည့် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး၏ ခရီးစဉ်အပြီး နောက်ဆက်တွဲကိစ္စများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံ အစည်းအဝေး တရပ်ကိုလည်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် တနင်္လာနေ့က နိုင်ငံခြားရေးဌာန အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်က သဘာပတိလုပ်ကာ ကျင်းပခဲ့သေးသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး၊ ဆန်စပါးဝယ်ယူရေး၊ လယ်ယာ အငှားချထားရေး၊ လမ်းဖောက်လုပ်ရေးနှင့် နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ရေး ကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြန်လည် သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်ဟု နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေးတွင် အကျိုးအမြတ် အများဆုံး ရရှိစေရန်အတွက် အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့ ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးမှာ အရေးကြီးကြောင်းဖြင့် ဒေါက်တာချောင်ဒရီက သတင်းကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ရာတွင် ပြောကြားသွားသည်။
မြန်မာ့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး ‘အရာမယွင်းရှိနေ’ ဟု စစ်အစိုးရ ကုလသံအမတ်ကြီးပြော
အင်္ဂါနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 04 2008 19:00 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ မြန်မာအမျိုးသမီးများသည် ရိုးရာဥပဒေအရ အထူးအခွင့်အရေးများရရှိ ခံစားရလျက်ရှိပြီး၊ ယောက်ျားများနှင့်တန်းတူ အမျိုးသမီးများ ရပ်တည်ခွင့် ရနေကြသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာ သံအမတ်ကြီးက တနင်္လာနေ့က ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရသည် အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးအတွက် အလုံအလောက် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းဖြင့် ဂျနီဗာတွင် ကျင်းပသည့် ‘အမျိုးသမီးများအား နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း တိုက်ဖျက်ရေး ကွန်ဗင်းရှင်း’ (CEDAW) ၏ ၄၂ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသည့် အမျိုးသား ၇ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၃ ဦးပါ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ခေါင်းဆောင် တက်ရောက်လာသည့် သံအမတ်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က တနင်္လာနေ့က ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လျက်ရှိသည့် ပြည်ပရောက် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းတခု၏ တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်သော ချယ်ရီဇဟော (Cherry Zahau) ကမူ “ဦးဝဏ္ဏ၏ ပြောကြားချက်သည် အလွန် အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာပြည်တွင် အမျိုးသမီးများကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှု လုံးဝ ရှိပုံမရဟု ပြောကြားခြင်းသည်လည်း လုံးဝ ယုံကြည်နိုင်စရာ မရှိကြောင်း” ဖြင့် တနင်္လာနေ့က ပြောပါသည်။
ယခင် ရက်သတ္တပတ်က ‘အရိပ် အစီရင်ခံစာ’ (Shadow Report) ကို အခြား အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် ၈ ဦးနှင့် အတူ ပူးတွဲတင်သွင်းခဲ့သည့် ဇဟောက “ဦးဝဏ္ဏ ပြောကြားခဲ့သည့် အခြေအနေသည် ကျမတို့ သိထားသည်များနှင့် လုံးဝ ကွဲပြားခြားနားနေကာ အခြေအနေများနှင့် လုံးလုံးလျားလျား ကွာခြားနေကြောင်း” ဖြင့် စစ်အစိုးရ၏ CEDAW အစည်းအဝေး အစီရင်ခံစာပါ အချက်အလက်များကို ချေပ ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
အလွန် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဘွယ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် နိုင်ငံတကာ၏ ပြစ်တင် ဝေဘန်မှုများကို ခံနေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မာနိုင်ငံကျေးလက်နေ အမျိုးသမီးဦးရေ၏ ၇ဝ% ကျော်သည် သင့်တော်ကောင်းမွန်သည့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုကို ခံစားခွင့် ရနေကြပြီး၊ အရွယ်ရောက်ပြီး အမျိုးသမီး အများစုအတွက်လည်း အထက်တန်း ပညာသင်ကြားခွင့် အခွင့်အရေးများကို အပြည့်အဝ အာမခံ ပေးထားသည်ဟု ယင်းအစီရင်ခံစာတွင် စစ်အစိုးရက ဖေါ်ပြ ရေးသားထားပါသည်။
မြန်မာစစ်တပ်က အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစု လူမျိုးစုများ နေထိုင်သည့်ဒေသများရှိ အမျိုးသမီးများကို အရမ်း ကာရော မုဒိမ်းကျင့်သည်ဆိုသည့် စွပ်စွဲချက်များကိုလည်း ဦးဝဏ္ဏက ငြင်းဆိုသွားခဲ့ပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ရှမ်းအမျိုးသမီး လှုပ်ရှားမှုကွန်ရက် (SWAN) အပါအဝင် တိုင်းရင်းသား အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်း အတော်များများက ဤအချက်ကို မီးမောင်းထိုး၍ အစီရင်ခံစာတရပ် ရေးသား တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံ ချင်းအမျိုးသမီးများ၏ ထီးရိပ် အဖွဲ့အစည်း တရပ်ဖြစ်သော ‘ချင်းအမျိုးသမီး အဖွဲ့ချုပ်’ (WLC) ၏ ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးမှူးဖြစ်သော ဇဟော ကမူ “မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးများအတွက် လုံခြုံမှု လုံးဝမရှိဘဲ စစ်အစိုးရသည် အမျိုးသမီးများကို ဆက်လက်ဖိနှိပ် အမြတ်ထုတ်လျက်ရှိကြောင်း၊ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးများကို အကာအကွယ် ပေးမထားကြောင်း” ဖြင့် ပြောကြားသွားပါသည်။
အမျိုးသားများ လွှမ်းမိုးကြီးစိုးသည့် ယဉ်ကျေးမှုရှိသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်နေသည့်အတွက် အခြေအနေများမှာ ပိုမိုဆိုးရွားသွားကြောင်း၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် အလုပ်အကိုင် ရရှိရေးအပါအဝင် နယ်ပယ်ပေါင်းစုံတွင် အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးများမှာ ချိုးဖောက် အမြတ်ထုတ်ခြင်း ခံနေရကြောင်းဖြင့် သူမက ပြောပါသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးအများစုအတွက် အမြင့်ဆုံး ရရှိနိုင်သော ပညာရေး အဆင့်အတန်းမှာ ဒဿမတန်းထိ သာဖြစ်ကြောင်း” ဇဟော က ပြောပါသည်။
ဇဟောနှင့် သူမ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်များက ပူးတွဲ အစီရင်ခံစာတစောင်ကို တင်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ထိုအစီရင်ခံစာကို တိုင်းရင်းသား အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ၁၂ ဖွဲ့ကို ကိုယ်စားပြုသည့် WLC နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ် (WLB) တို့ ပူးတွဲ တင်သွင်းခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာအမျိုးသမီးများက ‘အရိပ်အစီရင်ခံစာ’ (Shadow Report) ဟု ခေါ်သည့် အစီရင်ခံစာတွင် စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးများ ဆိုးရွားပြင်းထန်စွာ ထိခိုက် ခံစားနေရပုံများကို အသားပေး ဖေါ်ပြထားပါသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ CEDAW အစီရင်ခံစာကို ခုခံချေပထားသည့် ဤအစီရင်ခံစာတွင် ကျေးလက်နှင့် မြို့မှာပါ မြန်မာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုလုံးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိသားစုအတွင်းနှင့် အလုပ်ခွင်အပြင် အထက်တန်းကျောင်း အထိတွင်ပါ ဆရာများ၏ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကို အညီအမျှ ခံစားနေကြရကြောင်းဖြင့် ရေးသားထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုးရပြောင်းလဲရေး၊ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထူထောင်ရေးသည်သာ အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နိုင်မည့် တခုတည်းသောလမ်း ဖြစ်သည့်အတွက် ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ပြောင်းလဲရေး ဖြစ်စဉ်အတွက် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းက ဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါရန် အစီရင်ခံစာက တောင်းဆိုထားပါသည်။
သို့သော် ဤအမျိုးသမီးများ၏ အစီရင်ခံစာကို ငြင်းဆိုသည့် အနေနှင့် ဦးဝဏ္ဏနှင့် သူ့ကိုယ်စားလှယ်များက မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများကဲ့သို့ လုံခြုံမှုရှိကြောင်း ပြောဆိုပါသည်။ ထို့ပြင် အမျိုးသမီးများနှင့် စပ်လျဉ်းသော ပြဿနာ မှန်သမျှကိုလည်း လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတရပ်ဖြစ်သော မြန်မာအမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ချုပ် (MWAF) က ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိကြောင်းဖြင့် ပြောဆိုသွားပါသည်။ သို့သော် ဝေဘန်သူများကမူ အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်းသည် စစ်အစိုးရ၏ ရုပ်သေး အဖွဲ့အစည်းတရပ်သာ ဖြစ်ပြီး စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၏ ဇနီးမယားများ ကတော်များဖြင့် လည်ပတ် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုကြပါသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးတွေကို ကိုယ်စားပြု တက်ရောက်လာတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှာ အမျိုးသား ၇ ဦးပါလာတာတော့ အတော်ရီစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် အမျိုးသမီးတွေ ဖိနှိပ်ခံနေရတာ ထင်ရှားပါတယ်” ဟု ဇဟော က ပြောပါသည်။
ရေနစ်သေဆုံးသူ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သား ရုပ်ကလာပ် ပြန်တွေ့
အင်္ဂါနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 04 2008 18:50 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ မြန်မာပြည်အနောက်ပိုင်း ချင်းပြည်နယ်တွင် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးအပြီးအပြန် ကုလားတန်မြစ်အတွင်း လှေမှောက်၍ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားတဦး ပြီးခဲ့သည့်လ ၃ဝ ရက်နေနေ့က ရေနစ်သေဆုံးခဲ့ရာ ၃ ရက်အကြာ၌ ပြန်လည် တွေ့ရှိသည်။
အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်အခြေစိုက် ချင်းအငတ်ဘေး အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ - CFERC ၏ ယာယီ ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဂျွန်တွီဟင်း - John Tuihing (၃၆ နှစ်) ၏ အလောင်းကို ၃ ရက်အကြာတွင် မြစ်အတွင်းမှပင် ပြန်လည် တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တဦးဖြစ်သူ ဆန်ဘစ် - Sangbik က ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
“သူက ရှင်းလက်ဝရွာက ရွာသားတွေကို ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းတွေ ဝေဘို့သွားတာ။ အဲဒီရွာကအပြန် အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်အနားက ကုလားတန်မြစ်ထဲ လှေမှောက်ပြီးသေတာ” ဟု CFERC ကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သူ ဆန်ဘစ်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဤအဖွဲ့သည် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်း စေတနာရှင်များဖြင့် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသည့် လူသားချင်း စာနာကူညီသည့် အဖွဲ့အစည်းတရပ် ဖြစ်သည်။
၂ဝဝ၆ ခုနှစ်ကုန်ကတည်းက ဝါးသုဉ်းပြီး ကြွက်ကျ၍ အငတ်ဘေး ကျရောက်နေသော ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်သို့ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ သွားရောက်ဝေငှအပြီး အပြန်ခရီးတွင် ဂျွန်တွီဟင်း သေဆုံးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကြွက်ကျ၍ ပြောင်းခင်းများ၊ စပါးကျီများနှင့် မီးဖိုချောင်ထဲအထိ အစားအစာများကို ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခံရ၍ အကြီးအကျယ် စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးမှု အကျပ်အတည်းနှင့် ကြုံနေရသော မြို့နယ် အများအပြားတွင် ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်သည်လည်း တခုအပါအဝင် ဖြစ်သည်ဟု CFERC က ပြောသည်။
ချင်းလူသားချင်း စာနာကူညီသည့် အဖွဲ့အစည်း အများအပြား နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်၍ ချင်းပြည်နယ် ကျေးရွာများသို့ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ လျှို့ဝှက်ပေးပို့နေစဉ် တွီဟင်း သေဆုံးသည့်သတင်း ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ဝါးသုဉ်းပြီး ကြွက်များ အလွန်အမင်း တိုးပွါးလာကာ ချင်းပြည်နယ်အနှံ့ စပါးခင်းများနှင့် အခြားသီးနှံများကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်သည့်အတွက် ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှ စတင်၍ ချင်းပြည်နယ်အတွင်း စားနပ်ရိက္ခာများ ရှားပါးလာခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဝါးသုဉ်းခြင်းသည် အနှစ် ၅ဝ တွင် တကြိမ်ကြုံရလေ့ ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ထိုအကျပ်အတည်းကို ကူညီဖြေရှင်းပေးသည့် အနေနှင့် ချင်း လူသားချင်း စာနာကယ်ဆယ်ရေး ကော်မတီနှင့် CFERC တို့ အပါအဝင် ပြည်ပအခြေစိုက် ချင်း လူသားချင်း စာနာကူညီသည့် အဖွဲ့အများအပြားက ပြည်နယ်တွင်းရှိ ဒုက္ခသည်များထံ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ပေးပို့ ကူညီခဲ့ကြသည်။
ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ရောက်ရှိခြင်းမရှိ၍ ချင်းပြည်နယ်ရှိ ကျေးရွာအများအပြားမှာ ယခုထိ အစားအစာ အကြီးအကျယ် ပြတ်လပ်ဆဲဖြစ်ကြောင်းဖြင့် မကြာသေးခင်ကမှ အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်သို့ လေ့လာအကဲဖြတ် ခရီးစဉ် သွားရောက်ပြီး ပြန်လာခဲ့သည့် ချင်း လူသားချင်း စာနာကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ရိုဇာထန်း - Rozathang က ပြောသည်။
“အခုတောင် အများစုက ဆန်ပြုတ်ကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ ရောစားနေရတုန်း ရှိပါသေးတယ်။ တချို့က အစားအစာ ပေါမယ့် နေရာတွေကို ရှာဘို့ ရွာက ထွက်သွားကြပြီ” ဟု သူက ပြောသည်။
ယခုအခါ ချင်းပြည်နယ်တွင် အနည်းဆုံး ဖလမ်းမြို့မှ ကျေးရွာ ၃၃ ရွာ၊ တီးတိန်မှ ၇ ရွာနှင့် တွန်းဇံမှ ၁၇ ရွာတို့သည် အစားအစာ ပြတ်လပ်ရှားပါးလျက် ရှိသေးကြောင်းလည်း သူက ပြောသည်။ သို့သော် သူ၏ လေ့လာ တွေ့ရှိမှုသည် စနစ်တကျ သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာသုတေသနပြုထားသည့် လေ့လာချက် မဟုတ်ဘဲ မျက်မြင် တွေ့ရှိချက်များကိုသာ အခြေခံပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် အကျပ်အတည်း၏ ပမာဏသည် ယခုထက် ပို၍ပင် ကြီးမားနိုင်ကြောင်းလည်း သူက ပြောသည်။
ဤအတောအတွင်း ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် - WFP က မဇ္ဈိမကို အီမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပြောကြားရာတွင် “ကြွက်ကျ၍ ဘေးဒုက္ခကြုံနေရသော ဒုက္ခသည် အရေအတွက်သည် ခန့်မှန်းခြေ ၁ သိန်းခန့်ရှိပြီး၊ ယင်းတို့သည် အစားအစာ ပြတ်လတ်လျက်သော်၎င်း၊ မကြာမီ ပြတ်လပ်တော့မည့် အခြေအနေနှင့်သော်၎င်း ရင်ဆိုင်နေရသည်” ဟု ဆိုသည်။
ကျေးရွာသားများကို ကူညီရေးအတွက် ‘အစားအစာ၊ ငွေနှင့် လုပ်အား လဲလှယ်ရေး’ အစီအစဉ်အရ WFP သည် ငွေနှင့် စားနပ်ရိက္ခာ အကူအညီများ ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းဖြင့်လည်း ပြောသည်။ ယင်းအစီအစဉ်အရ ရပ်ရွာတွင်း လမ်းကဲ့သို့သော အခြေခံ အဆောက်အဦများ တည်ဆောက် ဖောက်လုပ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ် - UNDP ကလည်း ကျေးရွာသားများကို အရေးပေါ် အစားအစာ အထောက်အပံ့များ ပေးပို့ ကူညီသွားမည် ဖြစ်သည်။
ချင်းပြည်နယ်ရှိ ကျေးရွာသားများကို ကူညီရေးအတွက် ယခုထိ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၇၈၂၆၁ ရရှိထားပြီး၊ ကျေးရွာသား ၅၅ဝဝဝ ဦးကို အစားအစာများ ဝေငှကူညီ ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဟု WFP က ဆိုသည်။
“အခြေအနေတွေက အခုထိ ခက်ခဲနေပြီး တချို့နေရာတွေမှာ ပိုလို့တောင် ဆိုးရွားလာနေပါတယ်” ဟု WFP ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ ခရစ်ကေး - ဃ့မငျုပေန က ပြောပါသည်။ ယခုလောလောဆယ် ကူညီထောက်ပံ့မည့် ပရောဂျက်တွင် မပါဝင်သေးသည့် နေရာများအတွက်လည်း နောက်ထပ် လေ့လာစူးစမ်းမှုတရပ်ကို ပြုလုပ်သွားဦးမည်ဟုလည်း သူက ဆက်ပြောသည်။
ကိုသူရိန်အောင်အပါအဝင် အကျဉ်းသား (၅) ဦးကို
ဖြိုးကြီး။ နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် မေဒေးအခမ်းအနားသို့သွားရောက်စဉ် အဖမ်းခံရသူ ကိုသူရိန်အောင် အပါအဝင် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခံထားရသူများကို စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်များက နယ်အကျဉ်း ထောင်များသို့ ပို့ဆောင်လိုက်သည်။
ယခုလ (၂) ရက်နေ့က ကိုသူရိန်အောင်အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (၅) ဦးကို နယ်အကျဉ်းထောင်များသို့ ပို့ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အစ်မဖြစ်သူက ပြောသည်။
“သူရိန်အောင်တို့ကို ထောင်ပြောင်းလိုက်တာ (၂) ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက ပြောင်းလိုက်တာ၊ အဲလိုပြောင်းလိုက်တာကို မိသားစုတွေကို အကြောင်းကြားတာလဲမရှိဘူး၊ ဘယ်သူမှလဲ မသိ လိုက်ဘူး၊ မနေ့ကမှ ထောင်မှာသွားစုံစမ်းလို့ ပြောင်းတယ်ဆိုတာကို သိရတာ”ဟု ကိုသူရိန် အောင်၏အစ်မဖြစ်သူ မစန္ဒာက ပြောသည်။
ကိုသူရိန်အောင်နှင့် ကိုကျော်မင်းအား စစ်တွေအကျဉ်းထောင်၊ ကိုကျော်ကျော်နှင့် ကိုဝေလင်း အား မန္တလေးအကျဉ်းထောင်နှင့် ကိုညီညီဇော်အား တောင်ကြီးအကျဉ်းထောင်များသို့ အသီးသီး ပို့ဆောင်လိုက်ပြီး ကိုမျိုးမင်းအား အင်းစိန်ထောင်၌ပင် ဆက်လက်ထားရှိကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“အရင်တုန်းက ဒီအင်းစိန်ထောင်မှာ တွေ့ရဖို့တောင် တော်တော်ကြိုးစား ပိုက်ဆံရှာပြီး သွားတွေ့ နေရာတာ၊ အခုလို အဝေးကြီးတွေကို ပို့လိုက်တော့ ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့ဖို့ဆိုတာ အရမ်းခက် သွားပြီ၊ ခရီးစရိတ်တွေက အဆမတန်ကုန်ကျတဲ့အပြင် ရောက်လို့ တွေ့ရမယ်၊ မတွေ့ရဘူးဆိုတာ ကလဲ သိပ်မသေချာဘူး ”ဟု ကိုသူရိန်အောင်၏ဇနီးဖြစ်သူ မမိုးမိုးက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်များက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအား မိသားစုဝင်များနှင့် တွေ့ရန်ခက်ခဲ့ သည့် နယ်အကျဉ်းထောင်များသို့ ပို့ဆောင်နေခြင်းသည် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် လုပ်ဆောင်နေ ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအမှုကို အမြန်ဆုံးအမိန့်ချမှတ်ရန် လုပ်ဆောင်နေ
ရိုးမ ၃။ နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈
စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်များက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို စစ်ဆေးမှုများ အမြန်ဆုံးပြုလုပ်နေပြီး ထောင်ဒဏ်များချမှတ်ကာ နယ်အကျဉ်းထောင်များသို့ပို့ဆောင်ရန် ပြုလုပ်နေသည်။
သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုခေါင်းဆောင် အရှင်ဂမ္ဘီရ၏အမှုများကို အမြန်ဆုံး စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေ ကြောင်း မိသားစုဝင်တဦးက ယနေ့ပြောဆိုလိုက်သည်။
“ဦးဇင်းကို အာဏာပိုင်တွေက သူ့အမှုတွေအကုန်လုံးကို အမြန်စစ်ဆေးနေတယ်၊ အခု ထောင်ထဲ မှာရှိတဲ့ အရေးကြီးထောင်သားတွေကို နေရာတွေခွဲပို့ဖို့ လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးကြားနေတယ်၊ ပြီးတော့ ဦးဇင်းကိုလည်း အမှုတွေအမြန်စစ်နေတယ်ဆိုတော့ သေချာသလောက်ဖြစ်နေပြီ” ဟု မိသားစုဝင်တဦးက ပြောသည်။
အရှင်ဂမ္ဘီရသည် ထောင်တွင်းဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေရာ ပြန်လည်သက်သာလာပြီဖြစ် သော်လည်း ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြော အထူးကုဆရာဝန်နှင့် ပြသနိုင်ရေးအတွက် အဆင်ပြေမှု မရှိသေးကြောင်း မိသားစုဝင်က ဆက်လက်ပြောသည်။
“လောလောဆယ် သူ့ကျန်းမာရေးက ထောင်တွင်းဆေးရုံမှာကုတာ နည်းနည်းတော့ သက်သာ လာပြီ၊ ဒါပေမဲ့ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ပြဖို့ တင်ပြထားတာတွေကတော့ သိပ်အဆင်မပြေ သေးဘူး”ဟု မိသားစုဝင်က ဆက်ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်း ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအဝင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် (၉) ဦးကို တရားရုံးအား မထီမဲ့မြင်ပြုလုပ်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၆ လစီ ချမှတ်ကာ မအူပင်အကျဉ်းထောင်သို့ ပို့ဆောင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလား-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံအငြင်းပွားနေသည့် နေရာအတွင်း ဂတ်(စ်)ရှာဖွေမှုကို မြန်မာဘက်မှ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ပြောကြား
သျှင်ထွီးခိုင် (နိရဉ္စရာ) ဘင်္ဂလား-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ အငြင်းပွားနေသည့် ပင်လယ်ပြင်တွင် မြန်မာ ဘက်မှ ဆက်လက် ဂတ်(စ်)ရှာဖွေတူးဖော်မှုကို ပြုလုပ်သွားမည်ဟု မြန်မာဘက်မှ ပြောကြားလိုက် ကြောင်း သိရသည်။
ယခု မြန်မာဘက်မှာ ဂတ်(စ်)တူးဖော်နေသည့်နေရာကို ဘင်္ဂလား ဒေ့နိုင်ငံပိုင်ဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလားအစိုးရ ပြောကြားချက်ကို မြန်မာဘက်မှ အသိအမှတ်မပြုဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ် ဦးဖေသန်းဦးမှ ယနေ့တွင် အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
အဆိုပါနေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဇုန်ဖြစ်သဖြင့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေမှုကို ရပ်တန့်စရာမလိုဘဲ ဆက်လက်ရှာဖွေသွားမည်ဟု မြန်မာ ထိပ်တန်းအရာရှိတဦးမှ ပြောကြား သည်။
လွန်ခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့က ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံ အမတ်ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံခြားရေးရာအတွင်းဝန် တိုးဟေးဟူစိန်ကဆင့်ခေါ်ပြီး ဘင်္ဂလာရေပိုင် နက်ကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီး ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေမှုကို ကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့် ချက် ချင်းထွက်ခွာ သွားရန် တောင်းဆို ထားသည့်စာတစောင်ကို မြန်မာ သံအမတ်သို့ ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျဘက်မှလည်း ရေတပ်သင်္ဘောများကို အငြင်းဖြစ်ပွား နေသည့် နေရာသို့ စေလွတ်ထားပြီး အဆိုပါ ပြဿနာကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ဘင်္ဂလား ဒေ့ခ်ျဘက်မှ ရေတပ်အရာရှိများအပါအ၀င် သံတမန်တဖွဲ့ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ စေလွှတ်ထားသည်။
နယ်နိမိတ်အငြင်းပွားမှု ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဘင်္ဂလာ- မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အလျော့ပေးမည့် ပုံမရှိကြောင်းနှင့် ဆက်လက်တင်းမာလာမည့် အခြေအနေ ရှိကြောင်း လေ့လာစောင့်ကြည့်နေသူများက သုံးသပ်နေကြသည်။
ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့မှ ရေတပ် သင်္ဘော ၂ စီး မြန်မာရေပိုင်နက်ထဲကို ကျူးကျော် ၀င်ရောက်ခဲ့သည်ဟု မြန်မာဘက်ကပြော
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံမှ ရေတပ် သင်္ဘော ၂ စီးသည် မြန်မာ ရေပိုင်နက်ထဲသို့ လွန်ခဲ့သော တနင်္လာနေ့ နံနက်က ကျူးကျော် ၀င်ရောက်ခဲ့သည်ဟု အမည်မဖေါ်လိုသူ မြန်မာပြည် ရေတပ် အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ သင်္ဘောနှစ်စီးသည် တနင်္လာနေ့ နံနက် ၈ နာရီအချိန်တွင် မြန်မာ့ ရေပိုင်နက်ထဲသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်ဟု သူကပြောသည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံမှ ရေတပ်သင်္ဘော သုံးစီင်္်းမှာ မြန်မာ ရေပိုင်နက်အနီးတွင် ယခုအခါ ရောက်ရှိနေပြီး ထိုအထဲမှ စစ်သင်္ဘောနှစ်စီးမှာ မြန်မာ့ရေပိုင်နက်ထဲကို ၀င်ရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တစီးက မြန်မာ့ရေပိုင်နက်ထဲကို ၈ မိုင်ခန့် ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး နောက်တစီးမှာ ၄ မိုင်ထိ ၀င်ရောက် ခဲ့သည်။ ကျန်တစီးမှာ ဘင်္ဂလာရေပြင်ပိုင်နက်ထဲမှ စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့သည်ဟု ပြောသည်။
သို့သော်လည်း ၀င်ရောက်ပြီး တနာရီခန့်အကြာတွင် ဘင်္ဂလာစစ်သင်္ဘော ၂ စီးမှာ ပြန်လည်ပြီး သူ့ရေပြင်ထဲသို့ ထွက်ခွာသွားသည်။
ယခုကဲ့သို့ဘင်္ဂလာစစ်သင်္ဘောများ မြန်မာရေပိုင်သို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သော်လည်း မြန်မာဘက်မှ တစုံတရာ လက်တုန့်ပြန်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခု ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှသင်္ဘောများ ၀င်ရောက်ခဲ့သည့်နေရာမှာ မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလာအကြား သူပိုင်ကိုယ်ပိုင် အငြင်းပွားနေသော နေရာဖြစ်သည်။
မြန်မာဘက်မှ ဂတ်(စ်)တူးဖေါ်နေသော နေရာတွင် စစ်သင်္ဘော ၆ စီး ရှိနေကြောင်း ဘင်္ဂလာဘက်က ပြောသည်။
နောက်ထက်ရရှိသော သတင်းအရ ဘင်္ဂလာဘက်ကလည်း အနည်းဆုံး စစ်သင်္ဘောတစီးကို အဆိုပါ ရေပြင်ပိုင်နက် အငြင်းပွားနေရာသို့ စေလွှတ်လိုက်သည်ဟု သိရသည်။
သို့သော်လည်း အဆိုပါ သတင်းကို အတည်ပြုချက် ရယူနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ၊
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ ယခုမြန်မာဘက်မှ ဂတ်ရှာဖွေ တူးဖေါ်နေသော အကွက်အမှတ် ၈-၁၃ မှာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ရေပြင်ပိုက်နက် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုထားပြီး မြန်မာ စစ်အစိုးရကို ကန့်ကွက်ထားသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အတွင်းဝန်ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ စေလွှတ်မည်
သျှင်ထွီးခိုင် (နိရဉ္စရာ) ဘင်္ဂလာရေပိုင်နက်အတွင်း မြန်မာရေတပ်သင်္ဘောနှစ်စီးဖြင့် ရေနံရှာသင်္ဘောများ ကျူးကျော် ၀င်ရောက်နေသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းရန် ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အတွင်းဝန် တိုးဟေး ဟူစိန်းကို မနက်ဖြန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့စေလွှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ခရီးစဉ်တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အတွင်းဝန် ဟူစိန်းအပါအဝင် ရေတပ်ဗိုလ်မှူး ချုပ်ရမန်နှင့် အငြိမ်းစားရေတပ်ဗိုလ်မှူးချုပ် အလံတို့လည်း မြန်မာခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါသွားမည် ဖြစ်သည်။
အလားတူ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အကြံပေးအရာရှိ အီဖကာ အာမတ် ဆော်ဒရီ က မြန်မာသံအမတ် ဦးဖေသန်းဦးကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ယမန်နေ့က ဆင့်ခေါ်ပြီး ဘင်္ဂလာပိုင်ရေနက် အမှတ် ၈ မှ အကွက် ၁၃ အနီးတွင် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေရန် မြန်မာသင်္ဘောများ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေသည်ဟုအသိပေးကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး ဘင်္ဂလာဘက် မှ မြန်မာသို့ကိုယ်စားလှယ်စေလွတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း အသိပေးခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။
သို့သော်လည်း မြန်မာ့ရေနံရှာဖွေရေး သင်္ဘောများမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျရေပိုင်နက်အတွင်းကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲ မိမိတိုင်းပြည်၏ ရေပိုင်နက်အတွင်းမှာသာရှိနေကြောင်း မြန် မာဘက်မှ တုန့်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံဆိုင်ရာ တောင်ကိုးရီးယား သံအမတ်ကိုလည်း ဆင့်ခေါ်ပြီး တောင်ကိုးရီးယားကုမ္ပဏီသင်္ဘောများ ဘင်္ဂလာရေပိုင်နက်ကို မြန်မာစစ်သေင်္ဘားများနှင့် ၀င်ရောက်ရေနံရှာဖွေသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကိုးရီုးယားသင်္ဘောများ အမြန်ဆုံး ထွက်ခွာပေးရန် တိုက်တွန်းပြောဆို ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျဘက်မှ မိမိနိုင်ငံ၏ အချုပ်အချာနှင့်နယ်မြေကို အစိုးရအနေဖြင့် ကာကွယ်စာင့် ရှောက်ရန်တာဝန်ရှိကြောင်း သို့ဖြစ်၍ လာမည့် ဒီဇင်ဘာလတွင်ကျင်းပမည့် နယ်နိမိတ်သတ် မှတ်ရေး နှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲမှ ထွက်ပေါ်လာမည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက် ရန်နှင့် လက်ရှိဘင်္ဂလာ ရေပိုင်နက်အတွင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည်များကို ချက်ချင်းရပ် ဆိုင်း ရုတ်သိမ်းပေးရန် မြန်မာ နအဖ စစ်အစိုးရကို ဘင်္ဂလာအစိုးရက တောင်းဆိုခဲ့သည်။
နယ်စပ်တွင် သေဆုံးသူ ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံသား ၄ ဦးကို မြန်မာ နစကမှ ပစ်သတ်သည်ဟု သတင်းဖြစ်ပေါ်
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံမှ ၀ါးခုတ်သမား ၄ ဦးကို အမည်မသိသူများက မြန်မာဘက်တွင် ၀ါးခိုးခုတ်နေစဉ် အသေသတ်ပြီး လွန်ခဲ့သောစနေနေ့က ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ဘက်တွင် လာရောက်ပစ်ထားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ၀ါးခုတ်သမားများကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သူများမှာ မြန်မာ နစကတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သည်ဟု နယ်စပ်တလျောက်တွင် သတင်းဖြစ်ပေါ်နေသည်။ သို့သော်လည်း သီးသန့်အတည်ပြုချက် ရယူနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။
သတ်ဖြတ်ခံရသူ ဘင်္ဂလီဝါးခုတ်သမား ၄ ဦးမှာ ကော့ဘဇားခေါ် ဖလောင်းချိတ်ခရိုင် အိုခီးယားမြို့နယ် ဒေလ်ပါရာကျေးရွာမှ အာဘူဟာကိန်း ၄၀ နှစ်၊ နုရ်ကော်ဘီ ၃၂ နှစ်၊ အာဟာမတ် ရှော်ဖိလ် ၂၈ နှစ်နှင့် ချင်းချူးအာလာမ် ၂၈ နှစ်တို့ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုမှာ ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ- မြန်မာနယ်စပ် မှတ်တိုင် အမှတ် ၃၉ နှင့် ၄၁ အနီးတွင်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ၀ါးခုတ်သမားများအား မြန်မာနိုင်ငံဘက် တစ်ကီလိုမီတာခွဲ အတွင်း တွင် ပစ်သတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နယ်စပ်သတင်းများအရ သိရှိရ သည်။
သတ်ဖြတ်ခံရသူများမှာ စနေနေ့နံနက်ပိုင်းက ၀ါးခုတ်ရန် နေအိမ် မှထွက်သွားပြီး အိမ်ပြန်မရောက်သည့်အတွက် လိုက်လံရှာဖွေရာ ဘင်္ဂလာမြန်မာနယ်စပ်ရှိ ခေါင်းတုန်း ဘီဒီအာရ် စခန်းအနီးတွင် သူတို့၏ အလောင်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသ ခံများက ပြောသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ခေါင်းတုန်း ဘီဒီအာရ်စခန်းမှ မြန်မာနစကများနှင့် ပြောဆို ဆွေးနွေးရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ယမန်နေ့ညနေ ရ နာနီခွဲအချိန်ထိ ဆက် သွယ်မှုမရ သေးကြောင်း ဘီဒီအာရ်နှင့်နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
မြန်မာနစကများမှာ နယ်စပ်တွင်ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ သစ်ခုတ်သမား၊ ငါးဖမ်းဖမ်းသများနှင့် တောင်ယာလုပ်ကိုင် စားသောက်နေသူများကို နစကတပ်ဖွဲ့ဝင်များက မကြာ ခဏ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီး ငွေးတောင်းခံလေ့ရှိသော်လည်း ယခုကဲ့သို့ သတ်ဖြတ်ခြင်းများ ယခင်ကမရှိကြောင်း ဒေသခံများ အပြောအရသိရသည်။
တရုတ်ရေနံရှာဖွေရေးအဖွဲ့ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တွင် ပြန်လည်ရေနံ စမ်းသပ်ရှာဖွေနေ
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရေနံတောင်ဒေသတွင် တရုတ်ကုမ္ပဏီမှ ရေနံစမ်းသပ်ရှာဖွေမှုကို ပြန်လည်စတင် လုပ်ကိုင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။
လွန်ခဲ့သည့်အောက်တိုဘာလ ဒုတိယအပတ်တွင် အဆိုပါ ရေနံရှာ ဖွေရေးအဖွဲ့သည် ရန်ကုန်မှတဆင့် ကျောက်ဖြူမြို့မှ ၁၅ မိုင်အကွာတွင်တည်ရှိသော မင်းပြင်သို့ ရဟတ်ယဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေသအတွင်းက ပေးပို့သောသတင်းအရ အဆိုပါရေနံရှာဖွေရေး အဖွဲ့ကို ရေနံတောင် ရယကဥက္က ဦးဖလူးအောင်၊ ကြံ့ခိုင်ဖွံဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် မင်းပြင်ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးတို့က ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။
ရေနံရှာဖွေရေးအဖွဲ့သည် ကျောက်ဖြူနှင့် မင်းပြင်အကြားတွင် တည်ရှိသော ရေနံတောင်၊ ချောင်းဖျား၊ ချောင်းဝ၊ အူချေ၊ ကလာဘာနှင့် ရေနံတောင်ဒေသ တို့တွင် ရှာဖွေစမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
ရေနံရှာဖွေရန် သတ်မှတ်ထားသော နေရာများတွင် ကျေးရွာသား များကို ၀င်ခွင့်မပြုကြောင်းနှင့် တချို့နေရာများမှာ စပါးခင်းများဖြစ်နေသဖြင့် တောင်သူလယ် သ မားများမှာ ရိတ်သိမ်းရန် အခက်ကြုံနေရသည်ဟု သိရသည်။
သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအာဏာပိုင်များကလည်း ရေနံစမ်းသပ်ရှာဖွေ တူးဖေါ်မည့် နေရာများကို တရုတ်ကုမ္ပဏီ၏ ညွှန်ကြားချက်အရ တစုံတရာလျော်ကြေးများ မပေးဘဲ သိမ်းပိုက်ထားသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
အဆိုပါ ရေနံစမ်းသပ်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့မှာ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တွင် သာမက လွန်ခဲ့သည့် ၁၉၉၅-၉၆ ခုနှစ်က စမ်းသပ်ရှာဖွေခဲ့သော စစ်တွေမြို့နယ် ကံ့ကော်ကျွန်း၊ ကျောက်တန်းနှင့် ရသေ့တောင်မြို့နယ်မှ ကူတောင်ဒေသများတွင်လည်း ဆက်လက်ရှာဖွေရန် အစီအစဉ် ရှိနေကြောင်း သတင်းရသည်။
၎င်းအဖွဲ့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရေနံရှာဖွေရေးကို လွန်ခဲ့သော တနှစ်ကျော်ကတည်းက ခေတ္တရပ်နားထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။